Xildhibaanka G/degaanka oo ah Hay’ad Dhise by UN-Habitat - issuu
11. Xildhibaanka G/degaanka oo ah Hay'ad Dhise
Hay'ad Dhise Tilmaame-bare 11 Tababarka Hoggaanka la Doortay
Xarunta QM ee Degsiimada Aadanaha (Habitat
Xildhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Tilmaame-baraha 11aad
Tababarka Hoggaanka la soo doorto Tarjumaddii:Akaademiga Nabadda iyo Horumarka (APD)
Istanbul, 1996kii- “Shir-madaxeedkii Caasimadaha”
Sawirrada waxa iska leh Joel Elrod Naqshadda iyo Jaan-goyntana Vicki Gillette
X/dhibaanka Deegaanku markuu yahay Hayâ&#x20AC;&#x2122;ad Dhise Taxanaha Agabka Tababarka
X/dhibaanka Deegaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Taxanaha Agabka Tababarka
Sida ku muujisan natiijooyin ka yimid qiimayn baahiyo tababar oo ay qabatay hay’adda Xarunta Qaramada Midoobay ee Deegaamada Aadamaha (Habitat), baahiyaha tababarka khuuseeya saarkiisha dawladda hoose ee la soo doorto (Xubnaha Golaha Odayaasha), amase siyaasiyiinta dawladda hoose, waxa loo arkaa inay ka mid yihiin kuwa ugu mudnaanta weyn caalam ahaan,isla markaasna ah kuwa aan cidi danayn dhinaca u bislaynta – waxqabsiga ee harumarinta iyo maamulka dawladda hoose. Sannadihii dhowrka ahaa ee ugu dambeeyey, dalal dhowr ah oo kala duwan sida Nepal iyo Poland ama Uganda iyo Paraguay ayaa markii ugu horraysay tobanaan sano gudahood ku dhaqaaqay meelaha qaar koodna markii ugu horraysay intii ay jireen, ayey galeen hawsha doorashada golayaashooda deegaanka iyo duqaydooda (mayors). Waxa kale oo ay baahiyaha tababarka ee saraakiisha la soo doortay ee dawladda hoose ajendaha xagga sare kaga jiraan dimuqraadiyadaha manashiibiyooyinka dhismay ee dalalka Ecuador, India, iyo USA (Dalka Maraykanka). Si loo daboolo baahiyahan, Xarunta Qaramada Midoobay ee Deegaamada Aadamaha (Habitat) waxay ku tallaabsatay oo ay tijaabisay taxanayaal buugag hagayaal ah oo tababar loogu tala galay si ay uga caawiyaan xubnaha golayaasha deegaanka sidii ay uga wakiillo noqon lahaayeen waddaniyiinta, uguna siin lahaayeen hoggaamin ku habboon magaalo iyo dad ahaanba si hawlkarnimo lehna ula shaqayn lahaayeen dawladda dhexe iyo maamulka, shaqaalaha farsamo yaqaanka ah iyo xirfadlayaasha sare ee xukuumadda hoose/baladiyaha iyo hay’adaha la halmaala. Buugaggu waxay marayaan/ ka sheekaynayaan siyaasad, go’aan qaadasho, wada xaajood, gorgortan iyo hoggaamin, ka soo qaybgal, maamulid iyo qabasho shirar, hawl u fududaynta iyo u suurtagelinta odayaasha deegaanka, maamulka maaliyadeed iyo baahiyaha kale ee Buuggan hagaha ah, “Odayga Deegaanku Marka uu yahay Hay’ad Dhise”, wuxu ka mid yahay taxanayaal 12 buug ah oo bilow ahaan loogu talagaly inay isticmaalaan/ adeegsadaan tababarayaasha hay’adaha tababarka ee waddaniga ah ee loogu talagalay dawladda hoose amase unugyada (waaxaha) ku yaal dawladaha hoose qudhooda. Waxa iyana taageero dheeraad ah uga dhigaysa tababarayaasha adeegsadka buugaggan talabixinta ah, Xarunta Qaramada Midoobay ee Deegamada Aadamuhu waxay soo daabacday buug kale oo cunwaankiisu uu yahay/ la yidhaa “Hagaha Tababaraha ee Tababarka ku Lug Leh ee Saraakiisha La soo Doortay”, kaasoo ka kooban qoraallo khuseeya tababaraha iyo war gebi ahaan loo diyaariyey inuu u faa’iideeyo tababarayaashaas markay u qorshaynayaan aqoon – isweydaarsiyo madaxda la soo doortay oo ku salaysan buugagga talabixinta/ hagidda. Waxa markaas la filayaa in buuggan tababarka ee hagaha ahi uu si weyn wax ugu tari doono xoogaynta dhismaha awoodda waxqabad ee dawladaha hoose dhinaca qaban – qaabada dhaqamada hoggaaminta toosan, taasoo ka mid ahayd ulajeedooyinkii waaweynaa ee 1996 Qaramada Midoobay shirweynihii ku saabsanaa Deegaamada Aadamaha ay u qabatay, Habitat II. Waxaan rabaa inaan uga mahad naqo Dr. Fred Fisher iyo Mudane David W. Tees diyaarinta buuggan talabixinta ah iyo kuwa kale ee taxanaha ku jira iyagoo la iii kaashanaya shaqaalaha Xarunta Qaramada Midoobay ee Deegaamada Aadamaha
(Habitat) waaxda tababarka ee ku dhextaalla barnaamijka tababarka, kaasoo ay taakulayso Dawladda Netherlands. Waxaan iyana doonayaa inaan xuso ka qaybgalka tababarayaasha iyo madaxda dawladda hoose ee Costa Rica, El Salvador, Kenya, Lithuania, Romania iyo Uganda, kuwaasoo naga taageeray tijaabadii goobta shaqada ee murtida tababarka. Dr. Wally N’ Dow Kaaliyaha Xoghayaha – Guud ee Xarunta Qaramada Midoobay u Qaabilsan Deegaamada Aadamaha (Habitat)
AQOONSI Tarjumadda iyo habaynta af Soomaaliga ah ee Tilmaame-barayaasha Hoggaanka la soo doortay waxay ku hirgashay Barnaamajka Is-maamulka Fiican iyo Tababarka Hoggaanka la soo doortay ee ay maal-gelisay EU-du, isla markaana uu fuliyay Xafiis Goboleedka UN-HABITAT ee Afrika iyo Dalalka Carbeed. Tarjumadda iyo habaynta af Soomaaliga ah ee Tilmaame-barayaashan Tababarka Hoggaanka la soo doortay, waxa ka hawl-galay koox tarjumadda ku xeel dheer oo ka tirsan: Akaademiga Nabadda iyo Horumarka, Jaamicadda Hargeysa iyo Jaamicadda Cammuud; iyaga oo ay ka caawisay Hayâ&#x20AC;&#x2122;adda QM ee HABITAT, laanteeda Hargeysa ku taal. Mahad-naq gaar ah waxa mudan Akaademiga Nabadda iyo Horumarka oo ka hawlgashay tifaf-tirka iyo isu-ekeysiinta Tilmaame-barayaashan. Waxa kale oo mahad-naq mudan Jacfar Maxamed Gaaddaweyne oo Akaademiga Nabadda iyo Horumarka ee Somaliland ka tirsan, Maxamed Muumin oo Jaamicadda Bariga Afrika ee Puntland ka tirsan iyo Maxamed Afrax oo Xarunta Cilmi-baadhista iyo Dood-wadaagga ee Koonfurta-Dhexe ee Soomaaliya ka tirsan, kuwaas oo wada diyaariyay tarjumadda ereyada Ingiriisiga ah ee Tilmaame-barayaashan ku jira. Mahad-naq gaar ah waxa isna mudan Maciej Sudra oo diyaariyay astaamaha iyo naqshadaha jaldiyada Tilmaame-barayaashan.
Koofiyadda uu xidhan yahay qofka geesta midigta ku sawiran laguna muujiyey bogag soo socda waxa loo soo qaatay si loo bandhigo kaalinta uu ku jiro odayga deegaanku sida ku cad tilmaamebarahan. Waa koofiyad maro ah oo ay xidhaan dadka beera xashiishadda nooca loo yaqaan “Opium-ka”ee ku nool xadka Pakistan
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise
Qaybta 1aad Qormo la xidhiidha odayga Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Qeexid Soo-ururin Milicsi Ka wada-Xaajood Door: Agab loo adeegsado hawlo badan Aqoonsiga dhaqammada kala Duwan Gorgortanka doorka ee Golaha Degaanka iyo Shaqaalaha Istraatiijiyadaha kale ee hore loogu marinayo golaha degaanka/ xil-gudashada shaqaalaha Qiimaynta madaxa fulinta Milicsi Wax qabadka haya’edeed Alkumidda: tan iyo wixii dhaafsiisan Milicsi Qiimaynta Hay’adda Goldaloolooyinka fulinta Xalliibnaanta iyo Xisaabinta Milicsi Dhiiri-gelinta alkumidda Gebogebo Qoddobo Muhiim ah Raad-raac
3 4 4 4 5 6 6 8 9 10 10 11 13 14 14 15 16 19 19 20 21
Qaybta 2aad Aqoon-is-weydaarsi ku saabsan odayga Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Muuqaal Guud 11.1 Layli diyaar garow ah: Dhibaatadu maxay tahay? 11.2 Bandhigga tababaraha 11.3 Dhacdooyinka halista ku ah waxqabadka hay’adeed 11.4 Diraasad xaaladeed: wax-ka-bedelka qaabka xafiiska shaqaalaha ee Croptown 11.5 Layli: gorgortanka kaalineeed ee Golaha shaqaalaha 11.6 Dood hagan: qiimaynta shaqaalaha 11.7 Layliga xirfad gudbinta
Tababarka Hoggaanka la soo doorto vii
22 24 26 27 28 30 35 40 42
SIDA LOO ISTICMAALAYO TILMAAME-BARAHAN Tilmaame-barahan tababarka khuseeya lagana qoray mawduuca “Odayga Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise”, sida kuwa kale ee taxanahan ka mid ah, waxa loo isticmaali karaa siyaabo dhowr ah.
Diraasad kuu gaar ah Qormada lagu furay buuggan waxa loogu talagalay is – farid. Waxaad u baahanaysaa oo keliya waxa weeye meel aan buuq lahayn oo aad ku fakirto, waqti iyo wixii aad wax ku qori lahayd. Si aad natiijooyinka ugu wacan u gaadho, waxaanu kugu dhiirrigelinaynaa inaad qoraal ka dhigto jawaabaha su’aalaha hadba lagaa weydiiyo qoraalkaas tafaasiisha leh. Qiimaha barashada warka ayaa la isugu dhuftay (multiplied) akhristaha dhowr jeer, isagoo waqti ku qaadanaya si uu arrintaas u qabto.
Tababarka aqoon-is-weydaarsiga Qoraalada kooban iyo murtida layliga ee tababaraha kuna jira buuggan hagitaanka waxa loo qoondeeyey inay isticmaalaan/ ku dhaqmaan tababarayaal waaya – aragnimo u leh aqoon – isweydaarsadka tababarka, kuwaasoo loogu talagalay odayaal deegaan ka kala yimaadda dawlado hoose oo kala duwan. Waxaanu ku soo darnay noocyo kala geddisan oo hawlaha barashada iyo qaabab dookumanti (formats) si ay u siiyaan tababarayaasha jajabnaan badan/ kala doorasho badan markay qabanayaan aqoon – isweydaarsad ku habboon baahiyaha cayiman ee odayaasha deegaanka ka soo qaybgelaya. Ku talagalkayagu wuxu ahaa markii aanu gelaynay hawsha buuggan inaanu kugu dhiirrigelino tababare ahaan si aad ugu soo biirsato/darsato khibradahaagii, korna ugu qaaddo tayada barashada ee murtida tababarka uguna gudbiso odayaasha deegaanka ee ka soo qaybgala.
Tababare ahaan, waxa laga yaabaa inaad go’aansato inaad ugu dhaqanto murtida buuggan ku jirta sida rasmiga ah ee ay isu xig – xigto iyo qaabka loo soo dhigay. Ha yeeshee, haddii aad door biddo, dib ayaad u nidaamin kartaa ama aad u hagaajin kartaa murtida luqadda sida hadba looga baahan yahay in lagu helo ulajeedooyinka xaalad tababar oo gaar ah. Waxaad dooran kartaa inaad siiso muddo saddex saacadood ah carbis iyo hawlo muhiim ah oo ku jira buuggan. Ama waxaad ka faa’iidaysan kartaa murtida badan ee uu buuggu ka kooban yahay adigoo ku kordhinaya/ raacinaya mid aad adigu iska leedahay si aad u gaadhsiiso xilliga barnaamijka maalin dhan.
Buuggan talabixinta ahi wuxu ka mid yahay taxanayaal laba – iyo – toban ah oo ku saabsan tababaridda hoggaanka la soo doorto. Waxad go’aan ku gaadhi kartaa amase Tababarka lagaa codsan karaa inaad qabato aqoon – isweydaarsi lagaa rabo inaad isticmaasho Hoggaanka la buug wax ka badan ama dhammaantood xilli intaas ka badan gudihii. Iyadoo buug soo doorto kasta gaarkiisa loo isticmaali karo, haddana marka sida ay isu xig – xigaan loo 1 isticmaalo waxay siin kartaa odayaasha deegaanka ee ka soo qaybgala yaasha ah waaya aragnimo barasho oo awood leh midaysana.
Tababar-kooxeedka Murtidan waxa kale oo loo isticmaali karaa, iyadoo doorbidasho ahaan lala kaashanayo tababare khibrad leh/ hawl fududeeye, taasoo hore loogu marinayo xilgudashada odayaasha deegaanka oo isla gole qudha ka wada shaqeeya. Marka la tababarayo odayaal deegaan meel ka wada shaqeeya, waxaanu rumaysanahay hawl fududeeyuhu/ suurtageliyuhu inuu u diyaar garoobo habaynta hawlaha tababarka ee ku qoran buuggan talabixinta ah siyaabo kala duwan. Waxa iman kara munaasabado, adigoo ah hawl fududeeye, aad door biddo inaad la timaaddo hawlo cusub, arrintaasoo ku xidhan hadba xaaladda iyo dhaqanka ay ku sugan tahay kooxdu. Xaaladaha sidaas oo kale ah waxaanu rajaynaynaa inaad u aragto buuggan sidii “Kolayga tuulka” oo ay ku jiraan fikrado badan oo tababar la xidhiidha lana kala door – dooran karo si la isugu dhafo la isuna dhinac dhigo, loo hagaajiyo amase looga guuro, sidii marba xaaladdu ay ku yeelsiiso. Waxaad haysataa waxyaale badan oo aad kala door – dooran karto, adigoo adeegsanaya buugaggan. Waxaanu rajaynaynaa inaad si buuxda uga faa’iidaysan doontaan.
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 2
Xildhibaanka Degaanku markuu yahay Hayâ&#x20AC;&#x2122;ad Dhise
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hayâ&#x20AC;&#x2122;ad Dhise
Qeexid Odayga deegaanku, marka uu ku jiro kaalinta ah Hay’ad Dhise, wuxu u tiiriyaa/ taakuleeyaa harumarka maamulka shaqaalaha iyo hay’adda dawladda hoose sidii xilal muhiim ah oo uu leeyahay hoggaanka la soo doortay.
Soo-ururin Horumarka hay’adeed, amase dhismaha awoodda – waxqabad sida inta badan ay u yaqaaniin xubnaha hay’adaha gargaarka debedda, wuxu dhibaato ku noqdaa hawlaha firfircoon ee dawladda hoose. Waxaynu dhugan doonaa saddex dhinac oo ay leedahay kaalinta hay’ad dhisuhu: xidhiidhka u dhexeeya golaha iyo shaqaalaha; harumarka shaqaalaha; iyo hababka loo dhiso awoodda – waxqabad ee hay’adda gebigeed. Gacan qudhi sacab ma garaacdo/ tunto - Qof aan la garanayn
Milicsi Marka aan ka fakiro kaalintayda ah Hay’ad Dhise ee Golaha Degaanka, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhacaa waa sidan hoos ku qoran:
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 4
Ka wada Xaajood Door: Agab loo adeegsado hawlo badan Intaynaan u degin/ gudagelin u quturka xidhiidhka u dhexeeya golaha degaanka iyo shaqaalaha, waxaanu doonaynaa inaanu soo qaadno hannaan gorgortan oo si ballaadhan loogu dhaqmo marka laga dhigayo hay’ad xukuumadda hoosoo kale ah, mid u shaqaysa si aad u firfircoon oo aad u karti badan. Marka aynu wada hadal guud ka sii yaalano gorgortan door/ kaalin kadib, waxaynu jalleeci doonaa sida loo isticmaalayo kolka la sii wanaajinayo wax qabadka golaha deegaanka iyo shaqaalaha. Immisa goor, waaya – aragnimadaada adigoo madax la soo doortay ah, ayaad mashkilado kala kulantay xubno kale oo ka tirsan “qoyska shaqada” ee dawladda hoose amase aad ka aragtay dhibaato cid aad la shaqaynayso oo heer kale oo dawladda ah ka soo jeeda? Ama waxaaba laga yaabaa inaad indhaha saartay golaha deegaanka oo ay dhibaato ka haysato kala saaridda doorka ay ka ciyaari karto iyo kaalinta ay leeyihiin guddi kale oo rasmi ah, sida guddida qorshaynta, amase xidhiidhka uu la leeyahay shaqaalaha. Noocyada sidaas ah ee dadku iskaga hor yimaaddo kaalinta, amase mad – madow doorka la ciyaarayo la xidhiidha, waa qaar caan ah, waxaanay si dhakhso leh ugu kaallifaan dadka wada shaqayn la leh hay’ado inay dejiyaan istraatiijiyo wax lagaga qabto. Waxaana mid lala fejeco aan ahayn in hawlgalka jaadkaas ah loo bixiyo gorgortan kaalineed. Gorgortanka kaalineed waa wax fudud oo la fahmi karo. Mar haddii adiga iyo qofka/ dhinaca kale aad go’aansataan inaad wada fadhiisataan oo aad ka wada xaajootaan kaalmahiina/ doorarka aad kala leedihiin (Sidaasi haddii ay dhacdo dhinaca/ qofka kale wuxu dareemayaa in loo baahan yahay inuu eego arrinka doorka isaguna), qabto waqti iyo meel la isugu yimaado wada hadalka. Waxaad soo qabataa/ magacowdaa goob sanqadh yar, raaxo leh iyo nefis iyo xilli labadiina dhinacba u fudud idinsiiyana waqti aad labadiinuba soo rog – rogtaan mawaadiicda laga wada xaajoon doono intaydaan isu – iman ka hor. Si ay kuugu sahlanaato u diyaargarowga kulanku, waxa lagugu talasiinayaa in dhinac kastaaba uu soo buuxiyo foom (form) ka kooban warbixinaha hoos ku xaddilan:
1. Haddii (tusaale, kooxda maamulku) ay tahay inaad qabataan arrimaha soo socda muddadii hore in ka badan, ama sidii hore ka wacan, waxay naga caawinaysaa (masalan, gole deegaan ahaan) inaanu siyaadino hawlkarnimadayada. 2. Haddii ay tahay inaad dhintaan qabashada ammuuraha soo socda, ama aad joojisaanba, waxay taasi naga caawinaysaa inaanu kordhino firfircoonidayada. 3. Arrimaha hoos ku qoran ee aad qabanayseen waxay naga taageerayaan sidii aanu u kordhin lahayn hawlkarnimo dayada, waxaanaanu rajaynaynaa inaad sii waddaan qobashadooda maarayntan la moodo inay fududahay ee lagu kala caddaynayo doorarka ayaa loo isticmaali karaa shakhsiyaadka, kooxaha iyo hay’adaha. Gorgortanka kaalineed
wuxu u baahan yahay inay labada dhinacba la yimaaddaan jawi furan, kaasoo la’aantii ku noqda hay’ado badan dhagaxa weyn ee lagu turunturoodo. Waxa kale oo loo baahan yahay deegaan ka caagan doonis isku xurmayn derejo oo dhextimaadda kuwa isku 5 dayaya inay ka heshiyaan khilaafka dhexyaalla.
Aqoonsiga Dhaqammada kala Duwan Waxaynu ogsoonahay xurmo – doonka, dabci adayga iyo furfurnaantu inay yihiin dhaqano gaar ah oo xasaasi ah, ha yeeshee, dhinacyadan ka mid ah hawlkarnimada hay’adda waxa suuragal ah in uu isbeddel ku yimaaddo. Waxaynu ka wada hadli doonnaa waxa loo yaaqaanno “Maareynta Tayada” (MT) mar dambe oo qoraalka faahfaahsan aynu weli ku guda jirno. Isugaynta maamulka tayo waxa weeye istraatiijiyo maamul oo ka timid dalka Japan kuna faaftay Maraykanka iyo Europe iyadoo socdaalkeedaasi kaga soo gudubtay xuduudaha dhaqanka. Markii ay shirkado Maraykan ah iyo dawladda hoose ay isticmaaleen qaabkan, hay’ado badani waxay u baahdeen inay u badheedhaan (waajahaan) mawduucyo u dhow inay xasaasi noqdaan, sida xaaladda kaalineed, caqabadaha/ waxyaalaha is – hortaagga ku noqda wada hadalka ee dhexgala qaybaha shaqaynaya, iyo xuduudaha saraakiisha awaamirta aan ka leex leexan. Waxa ku kallifay hay’adahaas inay ku shaqeeyaan MT, iyo inay la yimaaddaan isbeddello xagga dhaqanka shaqada, waxay ahayd rabitaankooda hawlkarnimo iyo tartan dheeraad ah inay galaan. Dhaqanka hay’aduhu wuu isbeddeli kara, waana inuu isbeddelo, haddii dawladaha hoose ay noqdaan qaar ku guulaysta daboolidda baahida codbixiyayaashooda. Waxa niyadsamaan leh in la ogaado inay jiraan qaabab/xarfado ka caawiya hay’adaha sida dawladda hoose ah sidii ay u heli lahaayeen is beddelo dhinaca dhaqanka/ dabeecadaha ah markay dadaal ugu jiraan inay u nuglaadaan baahiyaha is beddel ee codbixiyayaashooda.
Gorgortanka door ee Golaha Degaan iyo Shaqaalaha Golayaasha Degaanka intooda badan way soo maraan iska horimaadyo ku lug leh doorka/ kaalinta amase mad – madowyo dhexmara shaqaalaha dawladda hoose. Waxaynu ka soo qaadaynaa inaad rabto xaaladdani inay isbeddesho. Kadib markaad la jeex – jeexdo suurtaygalnimada gorgortanka door ee u dhaxeeya golaha deegaanka iyo shaqaalaha (madaxda – maamulka ama xubno shaqaale oo muhiim ah), waxaad abaabuli kartaa fadhigu waqtiga uu noqon karo. Abaabulkaasi waxa ka mid ah taariikh qabasho, goobta kulanka iyo gacan u gelinta foomka ay ku qoran yihiin warbixinaha kor ku xaddilan. Waa in dhinac kastaba la faro inay ku dhammaystiraan warbixinahaas foomka iyagoo qoran.
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Gorgortanka doorku wuxu faa’iido weyn keeni karaa marka hawl fududyan laga helo Hay’ad Dhise dhinaca saddexaad. Waxa laga yaabaa inaad doonayso inaad marti qaaddo tababare ka socda machadka taabarka ee dawladda hoose ee aad ka tirsan tahay si uu kaaga taageero hawshan. Tababarahaasi waa inuu xirfad u leeyahay sida loo maareeyo awoodda dhaq – dhaqaaq ee koox dhexdood ah iyo sifa faalaha loo xalilo dhibaatooyinka kooxda. Tababarka Laba siyaabood ayaa loo maarayn karaa hawshan. Labada kooxood (golaha iyo Hoggaanka shaqaalaha) ayaa uga jawaabi kara warbixinaha si guud ama si cayiman. Tusaale ahaan, waxay u isticmaali karaan warbixinaha si ay u raadiyaan/ helaan falalka shakhsi xubin la soo doorto gole ah, kaasoo ku kacaya falal ka xanaajiya/ ka dhirfiya xubin shaqaale, sida agaasimaha maaliyadda. Maaraynta labaad (ta abbaaraysa dhaqanka qof ahaan) waxay 6 noqon kartaa mid yara adkaata, laakiin dhalin karta natiiyooyin wacan waaga dambe.
Haddii wax cabbin ah/ mucaaridnimo leh aad kala kulanto maarayntan qofka ah, waxaad had iyo jeer ku bilaabi kartaa gorgortanka koox-kooxda ah adigoo aad wax usii cayimaya/caddaynaya hadba marka ay dhinacyada is-hayaa u soo debcaan maaraynta ee aad ka aragto natiijooyin midha dhaliya dadaalkaagii. Markaad isu keento naqilada foomamka la soo buuxiyey waa in la is weydaarsado, wada xaajoodna la bilaabo. Waxa muhiim ah in lagu koobo su’aalaha hore kuwa kala caddayn kara mawaadiicda ku taxan foomamka. Waxa iman doona waqti si weyn loo falanqayn doono qodobada. Iyadoo dhinac uu soo bandhigi karo warkiisa iyo ra’yigiisa intaan ka kale ka warbixin, waxa laga yaabaa inay ka hawlkarnimo badan tahay inuu dhinac kastaaba soo bandhigo jawaabihiisa intaan ka kale loo gudbin. Haddii aad u isticmaasho maarayntan hadba koox ka warbixinta ah, waxay ahaanaysaa inaad sugto inta caddaymaha shaqada ee saddexda ah laga warbixinayo, muddadaas oo in laga wada hadlo arrinkaas aanay suurageli karin. Sababta keenaysaana waxay tahay waxa suurtagal ah in warku uu sii tarmo/ bato ama soo – jeedihunu ay liisadka labada dhinacba galaan.
Tusaale, shaqaaluhu waxay sheegi karaan inay doonayaan in goluhu uu dhimo booqashooyinka kediska ah ee u ku tago qaybaha shaqaynaya si ay “u soo arkaan hawshu sida ay socoto”. Dhinaca kale haddii aynu ka eegno, waxa dhici karta goluhu inuu doono in qaybaha shaqooyinka hayaa ay toddobaad walba u soo gudbiyaan golaha warbixino si ay ula socdaan harumarka ay waax kastaaba gaadhay. Marka labadaas ammuurood la falanqeeyo, shaqaaluhu waxay u dhow yihiin inay ogolaadaan inay diraan warbixinaha, goluhuna uu yeelo inuu joojiyo caadada soo indha – indhaynta mar – marka ah ee goobaha shaqada. Ka-dib marka dhinac walba uu warbixiyo sharxana liiskiisa maadadaha ku yaal ee uu ku gorgortamayo, isugeynta kooxuhu waxay dib u eegayaan liisaska arrimaha is raaci kara (sida tusaalaha hadda lagu siiyey) waxaanay ku heshiinayaan/ isla meel dhigayaan liis waxqabad oo labada dhinacba khuseeya kaasoo ka jawaabaya soo – jeedinihii iyo wada hadalkii dabagalka. Marka dib loo dhugto mawaadiicda oo dhan tallaabooyinka waxqabadka u baahana la dejiyo, qof ayaa iskii ku tadawacaya ama loo xilsaarayaa inuu diyaariyo warbixin taxaysa maadadaha dhammaantood iyo waxqabadyada la siku X/dhibaanka raacay. Dhinac waliba waa inuu galo heerka gorgortanka ee layligan diyaarna u yahay Degaanku inuu ku dhawaaqo “haa”, ama “maya” , ama “waxaanu u baahanahay war dheeraad ah” markuu yahay oo ah waxqabad kasta ee la tixgeliyo. Labada kooxoodba waa inay kulan yeeshaan Hay’ad Dhise xilliyada qaarkood si ay dib ugu jallecaan in wixii lagu heshiiyey siday ahaayeen loo fuliyey go’aansadaana in maaddooyin kale ay fiiro u baahan yihiin.
Jirridda geedka Lotuska ayaa sheegta inta ay biyuhu hoos jiraan Maahmaahdee Thai 7
Istraatiijiyadaha kale ee hore loogu marinayo golaha deegaanka/ xil-gudashada shaqaalaha Dhinaca kale ee xidhiidhka u dhexeeya golaha deegaanka iyo shaqaalaha ee si weyn u carqaladaysan mar – marna dumiye ah waxaa weeye masuuliyadda golaha ee ku lug leh qiimaynta xil gudashada/ waxqabadka. Laba heer/ nooc oo qiimayn ah ayaa la qabtaa: b) qiimaynta waxqabadka shakhsi, iyo t) qiimaynta waxqabadka waax hay’adeed ama hay’adda gebi ahaanteed. Aan fiirino, marka hore,mawaadiicda qaar ka mid ah qiimaynta xubnaha shaqaalaha. Marka hore tijaabinta/ qiimaynta shaqaalaha dawladda hoose inta badan waxa yeedhisa oo go’aansata dawladda dhexe. Markaad xaqiiqadaas ogtahay, way adag tahay waana macangagnimo inaad si xaddidan/qeexan uga sheekayso mas’uuliyaddan ku jirta qoraalkan faahfaahsan. Waxaanay u dhowdahay inay aad ugu adkaato golaha beddelada qaabkan ah, haddii ay fursaddu tahay mid waddani ah. Mar labaadka, goluhu waa inuu ku yeesho kaalin xaddidan qiimaynta shaqaalaha, ugu yaraan si toos ah. Sida amarka guud uu dhigayo, odayaasha deegaanku waa inay isku hawlaan keliya qiimaynta wax qabadka/ xilgudashada madaxda fulinta iyo haddii laga tegi wayo karraaaniga golaha. Waxaanu nidhi “waa inuu” (Should) laakiin waxa jira waxyaalo ka reeban. Haddii dawladda hoose ee aad shaqada ka hayso ay tahay mid yar, odayaasha deegaanka waxa laga fili karaa inay masuulliyad toos ah ku lahaadaan maamulka waaxaha. Haddii arrinku uu sidaas yahay, odayaashaas deegaanku waxay u ictiqaadsanaan karaan inay leeyihiin xilka qiimaynta. Si kastaba ha ahaatee, waxay caadadu tahay madaxda shaqaaluhu ay tooska u hoos yimaaddaan tooska ah ee shaqaaluhu inay u xilsaaran yihiin qiimaynta, inkastoo qaar kale ay qabaan in dib loo fiiriyo masuuliyadda madaxda/ kormeerayaasha ee qiimaynta shaqaalaha. Hay’adaha qaarkood waxay isticmaalaan kooxo wax qiimeeya oo ka kooban odayaal guurti ah, halka ay qaar kalena ay ku soo darsadaan shaqaale hoosaadka oo ay u keenaan qofka la qiimaynayo (haddii ay jiraan shaqaale hoose) marka lagu gudajiro hawsha qiimaynta.
Marka saddexaadka, iyadoo ay jirto odayaasha deegaanku inaanaytoos ugu shaqa lahayn qiimaynta shaqaalaha,waxa haddana jira door muhiim ah oo uu ka geli karo goluhu hawshan. Doorkaas goluhu wuxu yahay inuu hubiyo hawshii qiimaynta xilgudashada (oo ah mid daboolaysa baahiyaha hay’adda iyo maamulkaba) inay u socoto si hawlkarinimo leh na ay u shaqaynayso. Hawsha qiimaynta ee firfircooni waa inay yeelato dhaqano dhowr ah. Waa inay ahaato: x x x
Mid rasmiya, heerkii la rabay gaadhsiisan, ujeeddo na leh; Mid ku lug leh shaqada iyo waxqabadka; Mid ku xidhan tafaasiisha hawleed ee rasmiga ah, waafaqsana xilalka qofka shaqaalaha ah; Mid loo isticmaalo qiimaynta qofka shaqaalaha ah iyagoo madaxdiisu ay runta ka fog yihiin inay tahay qayb ka mid ah hawsha qiimaynta xilgudashada qofka oo tan ka sal balladhan;
Mid loogu talagalay in ay ka helaan tababar xirfadeed kuwa qabanaya qiimaynta waxqabad; Mid qayb lagama maarmaan ah ka noqda go’aanada ku lug leh dallacaadda, bedelka,ama haddii loo baahdo tallaabooyin habsami ah qaadi kara eryi karana xubin shaqaale ah; Mid u barta go’aaminta la xidhiidha horudhigidda ashkhaasta shaqaalaha ah iyo weliba barnaamijyada lagu abaabulayo kooxo shaqo iyo hay’adda gebi ahaanteed.
Haddii aan dib ugu noqdo qodob hore aynu u soo marnay, Golaha Degaanku, wax yar ma ahee, waa inaanu ku lug yeelan xilka qiimaynta shaqaalaha. Hasa yeeshee, Goluhu wuxu u baahan yahay inuu qabanqaabo ku yeesho mowqifyada/ halka uu ka taagan yahay siyaasadda ee: b) la socon kara caadooyinka qiimaynta waxqabadka shaqaalaha ee la aqbali karo; t) in uu u tiiriyo maamulidda barnaamijka si cadaaladi ku jirto oo ujeeddo leh; in uu hore u mariyo waxqabadka shaqada.
Qiimaynta madaxa fulinta Shakhsiga ay tahay goluhu inuu si rutiin (routine) ah u qiimeeyo wuxu yahay madaxa fulinta hay’adda dawladda hoose. Waxa raaca dookumantiga gaadhsiisan heerka la rabo ee loo dejiyey qiimaynta madaxa fulinta, qiimayntu waa inay tixgelisaa dhinacyo saddex ah oo khuseeya waxqabadkiisa/ keeda: 1. Xidhiidhka shaqo ee uu la leeyahay golaha, shaqaalaha iyo shicibka waddaniyiinta ah. 2. Hadafyada iyo ujeeddooyinka la gaadhay. 3. Karti loogu sameeyo hoggaan maamul kaalinta iyo jagada. Dhammaan dhinacyadaas ku saabsan dib-u-eegidda waxqabadka waxay u baahan yihiin heerar ugu wacan in la gaadhsiiyo iyo baro laga qiyaas qaato oo ah dhaqamada X/dhibaanka la aqbali karo, kuwaasoo lagu qiimeeyo madaxa fulinta. Arrintaasina ma aha wax Degaanku fudud. Haddana, iyadoo aan la hayn xaqiiqo la wada ogolyahay oo ku salaysan inay markuu yahay labada dhinacba falanqayn karaan waxqabadka,waxa marlay adkaanaysa in go’aamo Hay’ad Dhise laga gaadho mustaqbalka madaxa fulinta ee hay’adda.
Taas micneheedu waxa weeye, iyadoo arrimo kalena ay jiraan , golaha iyo madaxa fulintu waa inay isku afgartaan waxa laga filayo madaxa fulinta, maaha oo qudha dhinaca golaha iyo xubnaha ku jira, ee waxa weeye arrimaha u dhexeeya madaxa fulinta, shaqaalaha iyo muwaadiniinta. Waxyaabahaas la filayaa waa inay kooban/ daboolaan dano kala duwan, kuwaasoo ay ku jiraan:
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 9
Waxqabadka barnaamijka iyo maaliyad kantaroolidda (taasoo sahlan si loo soo
Qormo x x
saaro); Lama – soo – taabtaanka, sida la xidhiidhka iyo aaminaadda oo lala yeesho hay’adaha, shirkadaha ay dantu ka dhaxayso dawladda hoose; iyo Maamulidda hay’ad firfircoo oo karti badan.
Waxyaalahaas la filayo oo dhan waa in lagu hirgeliyo qoraal ahaan iyadoo ay weheliyaan hawlaha cayiman iyo mas’uuliyadaha ku jira caddaynta jagada/ tafaasiisha hawsha.
Milicsi Sidee ayuu golahaaga deegaanku u qiimeeyaa hawlqabadka madaxa fulinta xukuumadaada hoose? Ma u malaynaysaa nidaamkiina waqtigan xaadirka ah lagu dhaqmaa inuu yahay mid hawlkar ah? Isbeddello sidee ah ayaad jeceshahay inaad ku aragto qaabka loo qiimeeyo waxqabadka madaxa fulinta? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Wax qabadka Haya’edeed Hay’ad Dhise
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 10
Dhinaca ugu dambeeya ee qiimaynta hawl qabadka ee aanu rabno inaanu ka warrano waxay tahay hay’adda. Waxa ka mid ah hababka ugu firfircoon ee loo qaban karo qiimaynta noocan oo kale ah waa mid ka dhan ah barnaamijiyada hore loo sii go’aamiyo iyo hadafyada adeegga iyo waxsoosaarka. Dabcan halkan waxaynu ka soo qaadaynaa in hadafyada iyo wax soosaarka loo dejiyey/ unkay sidii oo ay yihiin qayb ka mid ah miisaaniyadda amase hawsha qorshaha istraatiijiyada. Waax kasta iyo unugga hay’adaada manishiibyo waa in lagu dhiirrigeliyo inay aasaasaan wax soosaar adag oo run ah lana qiyaasi karo/ bartilmaameedyada wax soosaar ama hadafyada la samaysto xilliga miisaaniyadda iyadoo lala kaashanayo golaha. Hadii golihiinu uu
guddiyo ahaan ku shaqeeyo marka uu diyaarinayo miisaaniyadaha waaxaha ama kuwa barnaamijyada gaar ahaaneed, kolkaasoo ay tahay guddiyadaasi inay ka dhigaan tan qayb ka mid ah falanqaynta miisaaniyadooda ay la yeelanayaan shaqaalaha ka hor intaan talooyinka maalgelinta la hor keenin golaha oo isu dhan (haddii ay tani tahay qaabkiinu sida uu u shaqeeyo).
Soosaarka/ natiijada la sii kala bixiyaa waxay ka taageertaa Golaha iyo shaqaalaha inay sameeyaan qiimaynta xilgudasho sannad maaliyadeedka oo dhan. Waxa kale oo ay siiyaan golaha war aan qiima weyn lahayn oo khuseeya helidda sida lacagaha loo qorsheeyo miisaaniyadaha mustaqbalka. Warbixinta qiimaynta ee barnaamijiyada kala duwan iyo adeegyada ee aad u fidinayso codbixiyayaashada la’aanteed, waa ma dhacdo inaad go’aamo caqligal ah ka gaadho sidii aad ugu shaxayn/ qaybin lahayd khayraad/ kharashyo tirsan dano tartan ku jira iyo baahiyaha.
Hay’ad Dhisida : tan iyo wixii dhaafsiisan Waxaynu soo marnay laba maadadood oo mashaakil ka dhex abuura golayaal badan iyo shaqaalahooda, iska hor imaadka kaalineed iyo qiimaynta hawlqabasho. Marka laga hadlayo harumarka hay’adeed, labada mawduucba waa muhiim, laakiin waxay ka joogaan qaybniib ah (challenge) oo la xidhiidha dhismaha awoodda waxqabad ee dawladdiina hoose. Waxa jira maaddado kale, ama fursado lagu xoogayn karo hay’adaha, ha yeeshee marka hore waxaanu doonaynaa inaanu galno/ wax ka qabano duruufo loo arko lagama gudbaan oo ka hor yimaadda golayaal badan. Waxa ma huraan ah goluhu inuu lahaado shaqaale aad u xilkas ah oo karti badan si ay u fuliyaan/ hirgeliyaan siyaasadaha iyo barnaamijiyada. Shaqaalaha noocaas ah la’aantood, fursadihii ay ku noqon lahaayeen hawlkar aad ayey u yar yihiin. Runtu waa sidaas, xataa (ku darsoo) haddii dawladda hoose ay si weyn ugu tiirsato hay’adaha aan dawladda ahayn iyo waaxda gaar ahaaneed oo ay u fuliyaan qaybo ballaadhan oo barnaamijyada ah. Laakiin, waxaad odhanaysaa, waxaanu haynaa shaqaale hadda mushahar yar qaata, xirfad ku filana aan lahayn oo aan niyadsamayn/ himilo lahayn. Cawilnaqii arrimahaasi waxaanu qiraynaa inuu adag yahay. Haddii dawladiina hoosee aanay bixinayn gunno/ mushahar lagu noolaan X/dhibaanka karo waxay shaqalaha ku qasbaysaa inay raadsadaan meelo kale oo uu dakhli ka soo galo. Dakhli raadintaas shaqada debedda uga baxsan waxa suuragal ah inay keento Degaanku markuu yahay waqtigii iyo awooddii oo is dhima, shaqaaluhu waa inay daacad u ahaadaan Hay’ad Dhise shaqooyinka ay ka hayaan dawladda hoose, waxaanay ku abuuri karaan hay’adda iyo maamulayaasheeda cillado gaar ah oo dhinac – qallal geliya.
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 11
Hor iyo horraan, kaabidda/ cawilnaqsiinta shaqaalaha ee aan ku filnayn waxay dhalisaa mashkilado ku yimaadda xubnaha dadweynaha, codbixiyayaashaada. Waxaad ka soo qaaddaa mulkiilayaasha baayac-mushtarka oo yimid hoolka (hall) magaalada si ay u cusboonaystaan ogolaanshihii ganacsiga cid hawshaas u qabatana ka waayey meeshii. Arrintaasi waxay cadho gelin kartaa shaqaalaha isku deyaya inay ka soo baxaan nidarkii ahaa inay si buuxda shaqadooda u qabsadaan (saacadna aanay maqnaan). Waxay burburin kartaa waxa lagu sheegi karo habsami shaqo/ dhaqan shaqo oo laga yaabo in la soo dhisaayey hay’adda dhexdeeda sannado badan. Dabcan, way adag
tahay inay wax weyni ku qabsoomaan duruufahan oo kale.
Waxaan shaki lahayn aamuurtani inay mid caan ah tahay. Iyadoo aanay hawlyarayn sida looga baxo meeshaas dhiiqada leh, haddana waxa jira istraatiijiyo ka caawin kara dawladaha hoose siday u soo ceshan lahaayeen kantroolka looga baahan yahay in lagu dhiso hay’ad adag oo soosaar leh. Hoos waxa ku muujisan talooyin aan badnayn: x Dhin ama yaree shaqaalaha si aad u caydhiso “kuwa nafahooda oo qudh ah ay kula joogaan” (ghost employees) iyo weliba qaar kale oo aan soosaar lahayn. Dib u shaxee wixii dhigaal ah oo u qoondee amase u hur kuwa daacadda ah ee soosaar ka leh. Waxa laga baqaa inaad tidhaaho arrinkaasi siyaasad ahaan ayaan loo aqbali karin, kaasoo aanu ku jawaabi lahayn “Sidaasi ma ka dhigaysaa siyaasad ahaan wax la aqbali karo maamulida dawlad hoose oo aan wax karti ah lahayn, waxbana aan u qabanayn cod-bixiyayaashaada?” x Waxaad soo heshaa habab kala doorasho leh oo kale oo laga helo adeegyada qaarkood. Dhugo adeegsiga hay’adaha aan dawladda ahayn (NGOs) iyo istratiijiyaha maamulka bulshada si ay ugu “suurtagasho” codbixiyaashaada inay bixiyaan adeegyadooda qaar ka mid ah. Qandaraas la gal shirkadaha waaxda gaar inay hirgeliyaan adeegyada qaarkood, kuwaasoo wax u qabanaya si ka qiima jaban sida dawladda hoose ay ugu kharash garowdo shaqaalaheeda. Adeegga had iyo jeer maskaxda ku soo dhacaa wa qaadista khashinka, ha yeeshee waxa jira qaar kale oo badan.
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 12
Waxaad u soo dejisaa jidwal talantaali shaqo shaqaalaha aan karayn inay saacadaha shaqo oo dhan joogaan manishiibyada iyagoo loo qoray inay si buuxda u shaqeeyaan. Tusaale, goluhu wuxu dhimi karaa saacadaha shaqada ee maalintii, ha ahaatee, wuxu dalban karaa qof kasta oo shaqaale ahi inuu shaqada xaadir ku ahaado isla waqti isku mid ah. Taasi waxay keenaysaa kormeerid dhab ah/habboon waxaanay hubaal uga dhigaysaa/u akidaysaa inay cidi joogi doonto wax u qabata dadka xilliyada la sii sheegay ee maalintii. Taladan oo kale inta badan waa la arkaa “ARRINKAAS MA SAMAYN KARNO”! waayo?
Waxaad la timaaddaa habab lagu xiisageliyo/lagaga shaqaysiiyo shaqaalaha. Haddii koox hawleed oo ka tirsan waax ay isku muujiyaan inay lacag u kaydin karaan xukuumadda hoose oo ay hagaajin karaan tayada adeegga ay fidinayaan, waa inaad jeclaysato inaad siiso abaalmarin lacag caddaan ah oo lagu siinayo dadaal koodaas. Tababarku waa arrin kale oo dardar gelisa shaqaalaha, gaar ahaan haddii qofka shaqaalaha ah la siiyo fursad lagu tababaro shaqada, tababar kaasina uu ku lug leeyahay jid dallacaad leh oo taariikh mustaqbalka ah uu helayo.
Toosinta dhibaatooyinka muddada dheer taagnaa ee ka dhigay dawladiina hoose mid ku jirta hay’adaha kuwa ugu soosaarka yar leh bulshada ma ahaanayso wax hawl yar. Sii wadidda wixii aad hore u soo qabanaysay ee shaqayn waayey na manoqonayso jawaabta. Waxaanu rumaysannahay maalka ugu weyn ee loo baahan yahay in lagu dhiso kartida iyo awoodda – waxqabad ee hay’adda dawladda hoose inuu yahay fikirka wax abuura oo ay la yimaaddaan golaha iyo shaqaalaha soo saaridda habab cusub oo lagu hirgeliyo/ dhammaystiro barnaamijyada iyo adeegyada, adigoo isticmaalaya
khayraadka/ maalka aad gacanta ku hayso. Marmarka qaar sida qudha ee loo xalili karo mashkilad in doora taagnayd waa iyadoo dib loo sharxo, adigoo sidii hore ka duwan u eegaya, debeddana uga saaraya xuduudo aad adigu xariiqatay/jeexatay oo ah waaya aragnimadii hore; dabadeedna adigo mashkiladii madaxeeda hoos keenaya minjihiina sare; ugu dambayntiina falaya waxaanad ka fakirsanayn (kuwaasoo noqon kara adigoo ka fakira waxyaalo aanad weligaa hore uga fakirin)
Milicsi Dawladdiina hoose miyey ku jirtaa laba daran mid dooro oo la moodo inaanay xal lahayn sida ta kor ku tilmaaman? Haddii caynkaas ay tahay, waxaad miridho yar ku qaadataa maskax ku rog – rogidda habab golihiinu uu u xalili karo dhibaatada si ka duwan tii hore. Mar haddii layliganu aanu wax dhibaato ah ku gelinayn ha ka noq – noqon/ ka maagin inaad ka fakirto fikrado “waalan”. Marar badan, ayey fikradaha noocaas ahi keenaan jawaabo caqli weyn ku fadhiya.
?____________________________________________________________ ?____________________________________________________________ ?____________________________________________________________ ?____________________________________________________________ ?____________________________________________________________ ?____________________________________________________________ X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise
Qiimaynta Hay’adda Dedaal kasta oo la xidhiidha hay’ad dhisid qaabaysani wuxu si weyn uga faa’iidaystaa qiimaynta waxsoosaarka ,macaamiisha iyo raalli ka noqoshada wax-soo-saarka ee macaamiisha. Qiimaynta aynu maskaxda ku haynaa waxay dhugataa waxsoosaarka hay’adda oo dhan oo ay ku jiraan kuwa ay isticmaashay hay’addu (sida istoodhada, xafiisyada shaqaalaha, xisaabaadka). Waxa kale oo ay qiimayntu abbaartaa/aqoonsataa qof waliba wuxu hawl qabanayo iyo in cid kale ay qaban karto/ay tahay inay qabato hawl ka sii wacan marka la gudanayo shaqa kastaba ama adeeg walba. Qiimaynta hay’adeed ee caqligalka ah ee sidan oo kale ah, haddii loo gudagalo si dhab ah, waxa laga heli karaa fikrado badan oo ku lug leh siyaabaha loo xoojin karo hay’adda iyo in dib looga fakiro sida ay tahay inay dawladdiina hoose wax u qabato markay u adeegayso cod-bixiyayaasheeda. Qiimayntani wa inaanay ahaan mid kharash badan ku kacda, in kastoo shaqaalaha ay waqti ka qaadayso, golaha iyo shaqaaluhuna ay ballan qaadyo samaynayaan. Waa hawl ay suurtagelin karaan la taliyayaal laga soo kaxaysan karo machadka tababarka ee dawladdiina hoose iyadoo la adeegsanayo nidaamay soo dejisay UNCHS (Habitat). Naqil ah buugga talabixinta qiimaynta waxa la heli karaa iaydoo codsi loo qorto qaybta tababarka, UNCHS (Habitat). S.B. 30030, Nairobi, Kenya.
Qiimaynta hay’addu waa inay siisaa golaha warbixin ku saabsan meelaha bannaan ee ka muuqda dhammaystirka/ fulinta ee u dhaxaysa siyaasado hooda iyo waxyaalaha xaqiiqda ah ee dhaca markay shaqaaluhu gacanta ku dhigaan. Inta badan waxa jira meelo bannaan oo ka muuqda fulinta, sababaha keenaana way kala duwan yihiin. Sida la rumaysan yahay waxaan ahayn inaanay had iyo jeer shaqaaluhu wax dembi ah ku lahayn arrintaas. Halkan waxaanu ku soo xadilnay weydiimo adiga iyo xubnaha kale ee deegaanku aydin isweydiinaysaan haddii meelahaas bannaani ay soo baxaan. Waxa taasna ka sii wacan idinkoo is weydiiya su’aalahan intaydaan gaadhin heerka dhammaystirka, idinkoo weli ku guda jira qaban qaabo siyaasadeed. x x x
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 14
Shaqaaluhu fursad ma u heleen ka faalootan ku lug leh siyaasad la soo jeediyey intaan la qaadan, ra’yina aan laga dhiiban wixii walaac ah ee laga qabo dhammaystirka ammurtaas? Shaqaaluhu ma fahamsan yihiin waxaad rabto inay qabtaan? Wax ballanqaad ah/ nidar miyey galeen inay dhamaystiraan siyaasadda? Haddii ay maya tahay, waayo? Goluhu ma diyaariyey maalgelintii lagama maarmaanka ahayd ee lagu dhammaystiri lahaa siyaasadda? Siyaasaddu ma tahay mid run ah kuna dhammaan karta waqtiga loo qabtay? Cod-bixiyayaashaadu ma aqbali doonaan oo ma taageeri doonaan siyaasadda iyo cawaaqibka ay la timaaddo?
Qormo Iyadoo aynu ka hadlaynay siyaalaha loo xoojin karo hay’adda dawladda hoose, su’aalahani waxay si is le’eg u khuseeyaan dhibaatooyinka xidhiidhka ka dhaxeeya golaha iyo shaqaalaha. Nasiibwanaag, u helitaanka jawaabo qaar badan oo su’aalahaas kor ku ku xusan ah ayaa kallifaya hay’adda kharash yar, waxaanay ku kordhinayaan faa’iidooyin door ah. Faa’iidooynkaas waxa ka mid ah:
Shaqaalaha oo helaya fursad lagala tashado inta lagu gudajiro hawsha go’aan gaadhista; Shaqaalaha oo ka korodhsanaya inay si wacan u fahmaan waxa goluhu uu doonayo in la qabto; U-bislaynta shaqaalaha inay hawsha dhammaystirka ka qayb qaataan; Keenidda heer aaminaad iyo qaddarin oo dhexmara golaha iyo shaqaalaha, arrintaasoo dhalinaysa ogolaansho waxyaalo aan la isku raacsanayn iyo wada xaajood daacad laga yahay; Tijaabinta aqbalka cod-bixiyayaasha iyadoo la hubinayo in lagu socon doono talo-galka siyaasadda. Haddii aad beerto doog ma goosatid bariis. - Maah-maah reer Malaysiya ah
Xalliibnaanta iyo Xisaabinta Waxaanu ku soo qaadnay mawduucyada ka dhexmuuqashada iyo xisaabinta buugag hagitaan oo hore inoo soo maray waxaanaanu rabnaa inaanu wax ka sheegno mar kale. X/dhibaanka Maadadahaasi waxa weeye talooyin la xidhiidha xukun oo ahmiyadoodu ay maalin Degaanku kasta soo siyaadayso. Odayaasha qaarkood ayaa diiddan fikradda in xubnahaas markuu yahay firfircooni ay lug ku leeyihiin xukunka, mar haddii iyaga loo soo doortay xafiis Hay’ad Dhise dadweyne. Ha yeeshee, xubno gole deegaan oo tiro badan ayaa ogaaday/ ay u caddaatay in tayooyinkaas qof ahaaneed la abaabuli karo si ay uga caawiyaan golayaasha curinta iyo dhammaystirka barnaamijya dooda si ka firfircoon kana karti badan sidii hore. Markaynu erayo kale ku tilmaano, gudo ka aragga iyo xisaab celintu waxay yihiin istraatiijiyo siyaasadeed iyo maamul oo loo isticmaalo si ay wax u Tababarka qabsoomaan. Su’aalaha aanu kor ku soo caddaynay ee loogu talagalay in meelaha Hoggaanka bannaan ee ka muuqda dhammaystirka hawsha lagu xakameeyo halkooda. Waxa kale oo loo isticmaali karaa sal/ sees laga soo bilaabayo dhisme gudaha laga arki ogyahay la soo doorto xisaabtiisuna ay dhammaystiran tahay oo ah dawladda hoose. 15
Waxa loo yaqaan MT
Hay’adaha gaar iyo kuwa dadweynaha/ dawladda ee adduunka dhammaantii waxay ahamiyad dheeraad ah siiyeen siday u hagaajin lahaayeen maamulka khayraadkooda/ maalkooda. Wakaalado iyo shirkado badan ayaa gunnadu ay uga dhigan tahay caabbi soo kordhaya oo kaga imanaya xagga tartamayaashooda/ kuwa ka barbar ganacsanaya. Dhinaca waaxda dawladda culaysku maaha mid kaga imanaya wakaaladaha dawladda ee la tartamaya ee waa ku ka soo gaadhaya seesas maaliyadeed oo gudhaya iyo dalab codbixiye oo soo kordhaya kuna saabsan barnaamijyo iyo adeegyo wacan. Si ay ugu tartamaan adduunkan adkaaday, maamulayaasha waaxaha dadweynaha iyo kuwa gaarba waxay ku dhegeen/ laabta gashadeen istraatiijiyad hawleed oo loo yaqaan maaraynta tayada (MT). Waxa jira dhincyo ay leedahay IMT oo ka taageerta golayaasha iyo shaqaalaha dhismaha hay’ado sidii hore ka karti badan, istraatiijiyo kaa taakulayn kara daboolidda baahiyaha codbixiya – yaashaada. Kuwaas waxa ka mid ah: x x x x x x
Codbixiya – yaashaada oo aad ka dhigto sida macaamiisha iyo isticmaalyaasha, kuwaasoo ikhtiyaar leh; Ka fiirsasho dheeraad ah oo aad u yeelato tayada waxsoosaarka iyo adeegyada aad u fidinayso dadweynaha; Ka-hor-tegidda dhibaatooyinka halkii aad ka maarayn lahayd xilli dambe oo ay kharash door ah ku tegayaan hay’adda iyo waddaniyiinta; Wadaagga mas’uuliyadaha go’aan samaynta iyo mashkilad xalilka ee hay’adda gebi ahaanteed; Xoojinta shaqada kooxda, iyadoo ay ku jiraan in ka badan kuwa ku lug leh qaybta shaqada cayiman ee ka walaacsan mashkiladda xilligaas taagan; iyo Nidargelid/ ballan qaad ah hagaajin joogta ah oo la xidhiidha siday u shaqayso dawladda hoose iyo habka waddaniyiinteeda loogu adeego.
Istaaatiijiyadahan waxa laga yaabaa inay u qabaan odayaal badan oo deegaan ah iyo saraakiil sare ba xikmado gaboobay oo hiddo salka ku haya. Laakiin runtu waxay tahay, may helin jidkii loo marayey hawlaha maalineed ee dawladaha hoose inta badan. Bal aynu ka fiirino dhinaca aragtida kaalintaada adigoo ah alkume.
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise 1. Yool-higsi: Hay’ad Dhisidu kolkay tahay istraatiijiyo shaqaynaysa, way adag tahay
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 16
hirgelinteedu haddii aanay dawladda hoose haysan hawl guddi oo qeexan iyo hagitaan mustaqbalka la xidhiidha. Waxaad doontid ugu yeedh qorshe istraatiijiyadeed ama waxaad doonto. Waxa muhiim ah waxa weeye qodobaynta tiro hadafyo ah iyo ulajeeddooyin loogu talagalo bulshada, kuwaas oo b) ay isku raacsan yihiin xubnaha golaha iyo kooxda maamulka dawladda hoose t) ay taageersan yihiin taxane ballaadhan oo ra’yiga dadweynaha ah; iyo j) in loo diyaariyo khaaridada waddada go’aan samaynta waqtiga xaadirka iyo mustaqbalkaba khusaysa. Hadafyada iyo ulajeeddooyinkani waxay intii hore ka xoog roonaanayaan haddii ay yihiin qaar ka wacyi gashan xagga codbixiyayaasha tilmaamayana istraatiijiyo, nidarna ku gelaya, inay harumarinayaan tayada barnaamijyada dadweynaha iyo adeegyada (wacyigelinta
tayada ee macaamiisha loogu talagalay ee hore aanu u soo sheegnay.
2. Maaraynta Togan. Dawladaha hoose intooda badan waxay ku qasban yihiin inay “isku dayaan soo gaadhidda” iyagoo xooggooda iyo xoolahooda inta badan saaraya dhibaatooyinka muddada dheer taagnaa, oo marmarka qaarkood ay abuuraan golayaashii hore. Cuyub – u – celinta hannaankan maamul ee soo noq-noqonaya ma ahaanayo wax sahlan. Ha yeeshee,suurtagelintu way badnaanaysaa haddii goluhu uu leeyahay qorshe istraatijiyadeed inuu: b) hago shaxaynta iyo isticmaalka hantida yar; t) qabto diraasado suuragalnimo lagu sameeyo mashaariicda cusub si loo hubiyo inay u hirgelyaan sidii loogu talagaly iyo j) maal miisaaniyadeed oo ku filan socodsiinta hawsha iyo kharash bixinta maalgelinaha hadda taagan. 3. Go’aan-qaadashada idman. Arrinka ugu weyn ee weli ku qufulan hay’ado door ah wuxu yahay ku wareejinta awoodda iyo mas’uuliyadda heerar ku habboon oo ah go’aan samayn iyo mashkilad xalilid. Wax ka niyad jab weyni ma jiraan markaad booqato xafiiska karraaniga magaalada oo aad ku aragtid galal/faylal toonsan miiskiisa qoraalka iyo kabadhadiisa. Giddigiin arrinkaas waad wada aragteen. Waxa ku jira galalkaas waraaqo/dokumenti aad u xaddi badan, dadkaasoo si hawlyar loogu riixay (oo garab ku yimid) jagadaas ka tirsan silsiladda amarka leh (ee uu kuu caddayn karo liiska dheer ee saxeexyada ah ee ku yaal jeldiga (the cover)kuwaas oo siday u dhan yihiin isugu xidhan “shariidka cas” (hoosta iska og) ee sugaya usoo jeesadka/ tixgelinta madaxa maamulka, xagga hoose ee hay’addana derejo ahaan waxa ka buuxa madax waaxeed oo karti leh iyo xirfadlayaal sare kuwaasoo jidka lagu qallajiyey, maxaa wacay, waxaanay lahayn awoodii go’aaminta.
Habkan xilliyadii fogaa ee tegey lagu dhaqmi jirey, ee sii ololinaya/ sii shidaya baahida gumaysiga ee ah in laga kantaroolo go’aamada oo dhan xagga sare, wuxu dhaliyaa xaalad weyn oo calool istaag ku noqda hay’adda. Waxa u weheliya abuuridda carqaladda shaqo xumada ee qiimaha weyn kallifaysa maalinba maalinta ka dambaysa. Dusha ka kantarooliddaasi waxay sababtaa mijaxaabinta xiisagelinta shaqaalaha iyo nidarada ay galaan inay xilka si wacan uga soo baxaan. Maskaxda kama heli karno dhaqan ka muhiimsan kan higsadkaagu uu yahay inaad shaqada ka fadhiisato xilli hore oo aad xaqaagii hesho, kaasoo aad ku heli karto dadaal ku salaysan hagitaan gole iyo hay’ad dhisid.
Ubbo weyn oo xagga hoose ka daloosha lama buuxin karo. – Maahmaah Afrikaan ah
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 17
Milicsi Joogso daqiiqad oo maskaxda ka sawir xafiiska sarkaalka madaxa maamulka. Ma jiraan galal is-dul saran oo yaalla miiskiisa amase miiskeeda, teebalada iyo kabadhada oo u eg inay meelahaas muddo yiilleen? Haddii ay sidaas tahay, waxa kale oo aad fiirin/deyi kartaa waxay ku dambayn doonaan faylalkaas isdulrasaysani. Waxaad xariiqdaa qoraallo yar – yar oo ku lug leh sidaad uga la xaajoon lahayd mowduucan sarkaalka madaxa maamulka hab aad is leedahay wuxu keeni karaa natiijooyin sii socda muddo.
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 18
4. Harudhigidda hawl kooxeedka. Waxa si dhowaansha leh ugu xidhan cid kale u xilsaaridda go’aan samaynta iyo dhibaato xalilka ilaa iyo heerka ugu caqligalsan ee socodsiinta hawshu, waa harumarka kooxaha shaqada kuwaasoo daacad u ah fikirka in dhibaatooyinka intooda badan la xalili karo haddi kooxo karti badan oo waaya – argnimo leh la siiyo madax bannaani (awood iyo xil) iyo adduun lagama maarmaan ah oo uu wax ku meel-mariyo. Libinta Maareynta Tayo (MT) inteeda badan ee hore loo soo sheegay, waxa sabab looga dhigay ku dhaqanka kooxaha shaqo ee is – maamula ee leh awoodda iyo adduunka ay hawlaha ku hirgelinayaan, markay la kulmaan mashaakil u baahan in la xalillo.
5. Waxa si dhowaansha leh ugu xidhan cid kale u xilsaaridda go’aan samaynta iyo dhibaato xalilka ilaa iyo heerka ugu caqligalsan ee socodsiinta hawshu, waa harumarka kooxaha shaqada kuwaasoo daacad u ah fikirka in dhibaatooyinka intooda badan la xalili karo haddi kooxo karti badan oo waaya – argnimo leh la siiyo madax bannaani (awood iyo xil) iyo adduun lagama maarmaan ah oo uu wax ku meel-mariyo. Libinta Maareynta Tayo (MT) inteeda badan ee hore loo soo sheegay, waxa sabab looga dhigay ku dhaqanka kooxaha shaqo ee is – maamula ee leh awoodda iyo adduunka ay hawlaha ku hirgelinayaan, markay la kulmaan mashaakil u baahan in la xalillo.
6. Tababar, tababar, tababar: Hay’ad dhiska micnaheedu waa tababar. In kastoo ay jiraan waxyaalo badan oo loo qaban karo hay’ad xoogaynta ee aan u baahnayn tababar. Inta badan harumarka shaqaalaha waxa lagala mid dhigaa u diridda shaqaalaha joogtada ah tababarka muddada dheer ee lagu qabto machadka tababarka ee waddaniga ah. Waxase nasiibdarro ah, tababarka noocan ahi kharash door ah ayuu ku kacaa. Nasiib wanaag, kuwa ugu hawlkarsan uguna jaban (xagga kharashka) tababarada waxa laga heli karaa shaqada lafteeda. Harumarinta shaqaalaha ee shaqada gudaheeda ah iyagoo xilalkooda gudanaya waxay u baahan tahay kormeerayaal iyaga laftooda lagu soo jarabaray xirfadaha noocaas ah sida carbinta iyo hawlkooxeed, kuna nidargalay inay ku kaalmeeyaan dad kale siday wax u baran lahaayeen. Sidaas awgeed, furaha tababarka hawsha gudaheeda ah oo guul dhalisa waxay ku jirtaa doorashada ka fiirsiga leh, harumarinta, iyo taageerada joogtada ah ee laga korodhsado koox xul ah (kaadir) oo laga soo miidhay hormoodka kormeera yaasha ee u leh awood inay go’aammo gaadhaan marka loo eego/ u qalma hawlaha loo xil-saaray.
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 19
7. Carqaladaha qaab – dhismeed ee waxqabadka hay’adeed. Weligaa ma isweydiisay/ ka fakirtay maxaa ugu wacan hay’adda dawladda hoose sida ay u habaysan tahay? Waxa laga yaabaa inaanad is weydiin. Inteena badani si fudud ayeynu isaga qaadanaa/aqbalnaa qaab –dhismeedka hay’adaha sidii oo ay yihiin wax muqadas ah oo aan la taban karin. Weliba intaas waxa dheer, dawlada hoose intooda badan waxa dhidibada loo taagay lana habeeyey tobanaan sano ka hor markii uu u babac – dhigidda maamuliddu tiro iyo tayo ahanba ay ku kala duwanaayeen. Hay’ad dhisidda firfircooni waxay u baahan tahay in min waqti ilaa waqti dib loo dhugto hay’adda si looga warhelo in sida qaabkeeda loo dhisay ee loo habeeyey ay daboolayso baahiyaha xilligaas taagan ee golaha, shaqaalaha iyo codbixiyayaasha. Haddii aanay sidaas ahayn is beddel ku samee!
Dhiiri-gelinta hay’ad dhisida Wasaaradda Qorshaynta Siyaasadda iyo Fulinta ee xukuumadda Srilanka, iyadoo la kaashanaysa Wasaarad Goboleedyada, waxay qabataa tartan sannadeed khuseeya harudhigidda xilgudashada dawladda hoose oo loogu talagalay inuu dhiirrigeliyo waxqabad muuqda oo ay la yimaadddaan dawladaha hoose ee dalkaasi.
Waxaanu jecelnahay inaanu tilmaano wax yar oo ah heerka la rabo in la gaadho ee Wasaaraddu ay u qabatay tartankan oo ay rumaysan yihiin inuu muhiim u yahay arrimaha la doonayo in loo soo jeediyo dareenka/ fiirada dawladda hoose. Waxa kale oo ay tilmaamayaan qaar ka mid ah xubnaha mihiimka ah ee la gu tixgelinayo barnaamij kasta oo hay’ad dhisidda khuseeya ee goluhu uu gudan karo. Halkan waxa ku muujisan wax yar oo ah hawlaha iyo heerka laga doonayo in la gaadho ee wasaaraddu ay u isticmaasho qiimaynta waxqabadka barnaajiyada tartan ee dawladooda hoose;
Diyaarinta Barnaamijka horudhigidda waxqabadka marka la raacayo hagitaanada Wasaaradda; Alkumaynta shirar-kooxeedyada maaraynta, kuwaas oo la gaadhsiinayo tiradooda 12 shir sannadkiiba; Barnaamijka xidhiidhka dadweynaha oo ay ku jirto maalinta dadweynaha si loo la kulmo cashuur-bixiyayaasha iyo soosaaridda warbixin sannadeedka warku ku dhan yahay; Hannaan xafiis oo karti yo hufnaanba leh, kaas oo ay ku jiraan dejinta qaab habboon oo galalka (filing) ku lug leh iyo astaamo lagu dhejiyo dhismayaasha dadweynaha si loogu taageero waddaniyiinta socodsiinta ganacsiga; Hagaajin joogto ah oo lagu sameeyo dhismayaasha dawladda iyo warbixin saddex bilood ah oo ku saabsan xaaladda ay joogto/ ku jirto hantida (dhismayaasha iyo qalabka) oo dhan; Digtoonaan iyo ka-hor-tegid caafimaad oo ay ku jiraan sahaminta iyo diiwaangelinta goobaha ay kaneecado ka dhalato; Dejinta qaabab maamul oo maaliyadeed, taas oo ay ku jiraan heerar la rabo in laga gaadho noocyo dhowr ah oo ku lug leh dakhliga iyo kharashka; iyo Heerar kale oo badan oo la isticmaali karo oo dalka Srilanka lagaga cabbiro heerar cayiman oo waxqabadka dawladda hoose la xidhiidha.
Dawladaha Hoose ee Srilaanka waxay mid waliba ta kale kula tartantaa dhinaca tirada dadka ku nool iyadoo lagu helayo abaal marino iyo aqoonsad xilgudashada ah. Waa hab aad u fiican in lagu dardar/xiisageliyo gole iyo shaqaalaba si ay hore ugu dhigaan X/dhibaanka waxqabadkooda. Wax kale oo aqoon korodhsi ka hela madaxda iyo saraakiisha ku lug Degaanku leh heerarka sare ee waxqabad ee ay tahay suuragal inay guul ka gaadhaan socodsiinta markuu yahay hawsha dawladooda hoose. Hawsha noocan oo kale ah dawladaa hoose ee kuwan ka Hay’ad Dhise ballaadhan ayaa ku dhaqmi kara isla hay’adooda gudaheeda, iyagoo uga bilaabi kara tartan dhexmara waaxaha kala duwan uguna dhiirri-gelin kara horumarinta hawsha.
Gebogebo Tababarka Hoggaanka la soo doorto 20
Markii aad u tartamaysay doorshada golaha, waxa laga yaabaa inaanad aad uga fakirin kaalintaada khabiirnimo. Iyadoo sidaas ay thay, haddana guusha aad ku gaadhay inaad noqoto hoggaan la soo doortay waxay si weyn ugu xidhnaanysaa tayada waxqabad ee hay’adda dawladda hoose iyo shaqaalaha. Markaad arrintaas ogtahay, kaalinta hay’ad dhisaha waa inaan loo qaadan/ loo arag wax hawlyar.
Dedaalka adiga iyo saaxiibadaada golaha ku jira aad gelisaan dhismaha waxqabad idinka ayaa u aayaya siyaasad dejiyayaal ahaan iyo codbixiyayaashiina, kuwaasoo dawladda hoose uga fadhiya barnaamijyo taya leh iyo adeegyadaba.
Qoddobo Muhiim ah x x
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 21
Hay’ad – dhisiddu way ka ballaadhan tahay hagaajinta xidhiidhka u dhexeeya golaha iyo shaqaalaha,inkastoo ay tahay meel wacan oo wax laga bilaabo. Caddaynta/ qeexidda kaalintu waa u xubin muhiim ah dhinaca xidhiidhka golaha iyo shaqaalaha xuduudaha u dhaxeeya doorarkaasna waxa laga yaabaa inay u baahdaan ka wada xaajood min waqti ilaa waqti ah si ay xidhiidhadaasi u wacnaadaan, qaar midho dhaliyana u noqdaan. Iyadoo ay tahay odayada deegaanku inaanay dhexgelin qiimaynta shaqaalaha (waa hawl u taalla kormeerayaasha), waxaad u xilsaaran tahay inaad hubisid in uu jiro qaab qiimayn waxqabad oo u shaqaynayey sidii loo qorsheeyey. Waxa ka reebban arrintaas oo qudha waxa weeye goluhu inuu qiimeeyo wax-qabadka sarkaalka madaxa fulinta iyo haddii cid lagu daro karraaniga golaha. Qiimaynta waxqabadka hay’addu iyadu waa hubaal inay tahay mus’uuliyadda golaha, waana in loo galo sidii dedaal wada jir ah iyadoo lala kaashanayo shaqaalaha sare. Qabashada qiimayn hay’adeed oo ku saabsan alaabta wax soosaarka iyo macaamiisha, iyadoo la isticmaalayo qaabka UNCHS (Habitat), waxay u noqon doontaa sees adag qorsheynta harumarka hay’adda. Goldaloolooyinka ka muuqda fulinta had iyo jeer ma aha waxay eed ku leeyihiin shaqaaluhu. Xalliibnaanta iyo xisaabtanku waxay muhiim u yihiin samaynta abaabul hufan oo karti leh. Dawladaha Hoose ee hawlkarka ah waxa haga guddiyo wata hadafyo iyo ujeeddooyin cad oo qeexan oo u noqda khaaridada jidka mustaqbalka soo socda. Alkumiddu waxay u baahan tahay in la qaybiyo go’aan-qaadashada iyo maareynta xiisadaha lana gaadhsiiyo ilaa heerarka ugu hooseeya ee waxqabad ee hay’adda. Shaqa kooxeedku wuxu aad muhiim ugu yahay hay’ad dhisidda iyo waxqabadka hay’adeed ee harumarsan. Hormoodka Kormeerayaasha ee hawlkarka ah iyo tababarka shaqada dusheeda lagu qabto waxay xubno muhiim ah u yihiin waxqabad waaritaan leh. Marka arrinku yahay dib u habayn lagu samaynayo hannaanka dawladda hoose, xasuusnow in qaabku uu raacayo hawlgalka, oo aanu raacayn caadada/ dhaqankii hore.
Raad-raac Xarunta Qaramada Midoobay ee Degsiimada Aadanaha (Habitat), “Buug-gacmeedka Qiimaynta Hay’adeed ee Ururrada Degsiimada Aadanaha” (Nairobi,Kenya,UNCHS,1992)
Qeybta 2aad AQOON-iS- WEYDAARSI
Xildhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise
Aqoon is waydaarsi
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hayâ&#x20AC;&#x2122;ad Dhise Tababarka Hoggaanka la soo doorto 24
Muuqaal Guud Ujeeddo: Alkumidda waxa lagu sheegi karaa dedaal kasta oo loo galo horudhigidda waxqabadka hay’adeed. Alkumee ahaan, odayga Degaanku wuxu ku nidargashan yahay hawlo ka dhigaya hay’adda uu shaqada ka hayo mid ka wacan tii hore. Imtixaanka hor yaalla madaxa la soo doortay marka uu u shaqaynayo xukuumad hoose, waxay yahay in uu fahmo waxa loo baahan yahay in uu qabto ee hore loogu marinayo waxqabadka hay’adeed iyo inuu ku shaqeeyo qaabka keeni kara isbeddellada lagama maarmaanka ah. Aqoon isweydaarsigani wuxu xoogga saarayaa kaalinta odayga deegaanku uu ku leeyahay meelmarinta isbeddelada wax lagu hagaajinayo ee waxqabadka hay’adeed, iyadoo awoodda la saarayo sida loo gelayo ee xilkasnimada leh si wax looga beddelo xaaladaha laciifinaya hay’adda iyo sida loo wanaajinayo xidhiidhka u dhaxeeya golaha iyo shaqaalaha, kuwaasoo lagu heli karo qiimaynta waxqabad iyo ka wada xaajood kaalineed/door.
Arrimaha uu ka kooban yahay (Contents) Tilmaan kooban oo la xidhiidha hawsha barashada ayaa hoos ku muujisan iyadoo ay la socoto qiyaas ah waqtiga loo baahan yahay. Haddaad doonto inaad qaabka wax ka beddesho, wax aad ka dhinto ama ku kordhiso murti aad adigu leedahay, xorbaad tahay ee ku dhaqaaq. 11.1 Layli diyaar garow ah: Maxay dhibaatadu tahay? Ka qayb galayaashu way xasuusan yihiin waxa kaaga cadhaysiiya ee khuseeya waxqabadka hay’adaha ay ka shaqeeyaan ee ha ka wada hadlaan sababaha dhaliya iyo dawadooda/xalalkooda (45 daqiiqo).
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Tababarka Hoggaanka la soo doorto 25
11.2 Bandhigga tababaraha Bandhigid kooban oo ku saabsan sida loogu dhaqmo gorgortanka door si loo xalilo iska hor imaadyada adag ee golaha iyo shaqaaalaha is afgaran waayada; nidaamyo lagu hagaajiyo waxqabadka golaha iyo shaqaalaha, kuwaasoo ay ku jiraan habab lagu qiimeeyo sarkaalka madaxa fulinta; iyo sida loogu dhaqmo IMT si hore loogu dhigo karti badnaanta iyo hawlkarnimada guud ee dhammaystirka barnaamijyada dawladaha hoose. (30 daqiiqo)
11.3 Dhacooyinka halista leh ee waxqabadka hay’adeed. Ka qaybgalayaashu waxay akhriyayaan shan dhacdo oo tilmaamaya goldaloolooyinka hay’adda, waxaanay goosanayaan/go’aan ka gaadhayaan doorarka ku habboon ee ay leeyihiin xubnaha goluhu inay wax kaga qabtaan (60 daqiiqo). 11. 4 Diraasad xaaladeed: wax ka beddelidda qaabka xafiiska shaqaalaha ee Croptown. Ka qayqgalayaashu waxay akhiryaayaan xalad ku lug leh xubin gole oo isku deyaya inuu xoog ku marsiiyo isbeddel lagu sameeyo waax ka mid ah dawladda hoose, waxaanay ka wada hadlayaan dhaqanka xubinta golaha ka midka ah (60-75 daqiiqo) 11.5 Layli: Gorgortanka door ee golaha/shaqaalaha Ka qaybgalayaashu, iyagoo ciyaaraya doorarka shaqaalaha iyo xubnaha golaha, waxay jilayaan wuxu mid kastaaba ka kale kaga cadhoodo/dhirfo, waxay si wada jir ah u sheegayaan isbeddelada ay filayaan inay arkaan, waxaanay ka ada hadlayaan waxka beddelka doorarka. (120 – 150 daqiiqo) 11.6
Dood hagan: qiimaynta shaqaalaha.
Ka qabygalaayshu waxay ka wada hadlayaan kana jawaabayaan weydiinaha la xidhiidha waxqabadka shaqaalaha maamulkooda (75 daqiiqo) 11.7 Carbis la xidhiidha xirfad-beddelka Ka qaybgalayaashu waxay soo iftiin-celinayaan/xasuusanayaan waxyaalihii ay soo barteen, waxaanay samaynayaan ballan qaadyo ah inay ku dhaqmaan marka uu dhammaado aqoon-isweydaarsigu.
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Tababarka Hoggaanka la soo doorto 26
11.1 Layli diyaar garow ah: Dhibaatadu maxay tahay? Ujeeddo Carbiskan waxa loogu talagalay in laga dhex abuuro wada hadal ka qayb galaaysha la xidhiidha cadhagelinta hay’adda iyo baahida loo qabo in fiiro xoog ah la saaaro sababaha keena cadhooyinkaas.
Hordhac U kala saar ka-qayb-galaayaasha kooxo yaryar oo midkiba ay ka kooban tahay shan ilaa toddoba ka qaybgale. Waxaad weydiisataa ka qaybgale walba inuu ku qoro kaadh ah 3 x 5 inch qabytiisa sare wax gaar ah oo laga dhirfi karo oo khuseeya habka ay u shaqayso dawaladooda hoose. Caddayntaasi/qoraalkaasi waa inuu tilmaamo wax ay ku kacdo dawladda hoose oo ay tayahay inaanay ku kicin ama waxaanay dawladda hoose qaban oo ay tahay inay qabato. Markay ka qayb galaayshu bogaan arrinkan, waxaad ka codsataa inay hadda isticmaalaan qaybtii hoose ee kaadhka iyagoo qoraya jawaabta su’aasha soo socota.
Haddii aad wax ka qaban lahayd dhirifkan, muxuu noqon lahaa waxqabadkaasi
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Tababarka Hoggaanka la soo doorto 27
Markay ka qaybgalayaashu ay jawaabahooda ku qoraan kaadhadhka, waxaad weydiisataa inay ku dhejiyaan kaadhadhkooda gidaarada qolka kuna qaataan daqiiqado yar inay ku wareegaan gidaarada iyagoo akhriyaya waxyaalaha ku qoran kaadhadhka ka qabygalayaasha, markay akhriyaana inay dib ugu noqdaan meelihii ay fadhiyeen. Markay ka qayb galayaashu fadhiistaan, u sheeg in qaar badan oo arrimaha laga dhirfo ah oo ay soo qabteen ka qayb galayaashu ay runtii yihiin astaamo qoto dheer oo sees/bilow ka sarreeya kuna lug leh mushkiladaha hay’adda. Weydii ka qaybgalayaasha inay ka fakiraan waxa ka dambeeya ka cadhaysiinta hay’adahooda; si loo aqoonsado/ogaado waxa dhalinaya. Weydii sababta ay u ictiqaadsan yihiin inay muhiim tahay in la raadiyo lana daydayo habab lagu tirtiro/biiyo saabaha keena dhibaatooyinka hay’adda halkii laga daweyn lahaa astaamaha cudurka oo keliya.
11.2 Bandhigga Tababaraha Waqtiga loo baahan yahay: 30 daqiiqo Bandhigiddan waxa looga dan leeyahay inay siiso ka qaybgalayaasha fikrado iyo aragtiyo laga qabo doorka hay’ad dhisaha iyo seeska aragtiyeed ee ay u isticmaali karaan carbisyada qofka iyo kooxda ee ku jira aqoon isweydaarsadkan.
Ujeeddo: Bandhiggan waxa looga gol leeyahay in ka-qaybgalayaasha loogu deeqo fikrado la xidhiidha kaalinta Alkumaha iyo fikrado aasaasiya oo ay u adeegsadaan layliyada qofeed iyo kuwa kooxeed ba
Harbaaca Diyaari badhigidda oo ku salaysan warku saabsan doorka hay’ad_dhisaha oo laga soo qaadanayo qoraalka faahfaahsan ee aynu hore usoo marnay. Si aad u gaar ah, faaladaada xooggeeda saar sida loogu dhaqmo ka wada xaajoodka door si loo xalilo iska hor imaadyada adag iyo is af garan waayada golaha iyo shaqaalaha; nidaamyo lagu hagaajinayo waxqabadka golaha iyo shaqaalaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin siyaalo lagu qiimeeyo sarkaalka madaxa fulinta; iyo sida loogu dhaqmayo IMT iyadoo haru loogu marinayo karti badnaanta iyo firfircoonida ee gebi ahaan hirgelinta barnaamijyada xukumadda hoose.
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Tababarka Hoggaanka la soo doorto 28
Warka xaddilan ee ku yaalla kaadhadhka qoraalka kooban ayaan kaa caawin kara helintaanka/sugidda warka si hannaan leh oo jadwalka aanad uga bixin. Weydii su’aalo min waqti ilaa waqti intaad bandhigidda ku guda jirto, taasoo u noqon karta hubsiimo ka qaybgalayaasha dhinaca fahamka dareemadoodana soo jeedin kartaa. Bandhigidda waxaad ku sii balballaadhisaa waxyaalaha kaaba aragga (sida sawirada, filimka iwm), kuwaasoo ay ku jiraan waraaqaha khafiifka ah ee jaraa’idka loo isticmaalo ee wax lagu daabaco iyo qalabka waxa gudaha ugu jira gidaarka sawirkooda ka soo saaraya (overhead projector) qalabkasoo u noqonaya kaabe dheeraad ah xagga fahamka.
11.3 Dhacdooyinka halista ku ah waxqabadka hay’adeed Waqtiga loo baahan yahay:60 (daqiiqo) Ujeeddo: Layligan waxa loola jeedaa ka qaybgalayaashu inay aqoonsadaan doorka habboon ee xubnaha goluhu ay ka qaataan sidii loo awdi lahaa god-daloolooyinka waxqabadka hay’adda.
Habraaca Qaybi nuqullo ah warka ku cad bogga kan xiga ee ku lug leh shan god daloolo hay’adeed oo caan ah (dhacdooyinka halista ah), kuwaasoo laga yaabo in la arkay ama la soo gaadhsiiyey warkooda xubin golaha ka mid ah. Ka codso ka qayb galayaasha inay akhriyaan shanta dhacdo. Markay ka qaybgalayaashu bogtaan akhriska dhacdooyinka, u qaybi dhowr kooxood oo yar-yar. Koox kasta ka codso inay ka jawaabaan su’aalahan hoos ku muujisan: Muxuu yahay doorka habboon ee ay leeyihiin xubnaha Goluhu ee khuseeya horudhigidda waxqabadka hay’adda?
Waxaad siisaa kooxaha yar-yar qiyaastii 30 daqiiqo si ay uga wada hadlaan dhacdooyinka ugana jawaabaan su’aasha dhacdo walba ku saabsan. Soddon 30 daqiiqo ka bacdi, dib isugu yeedh kooxihii, mid kastana ka codso warbixin. Wadahadal.
SHAN DHACDO OO HALIS KU AH WAXQABADKA HAY’ADEED Dhacdada 1aad Booqasho dhowaanahan loo yeeshay xafiiska madaxa maamulka, waxay indhahaaagu qabteen miiskii qoraalka iyo miis kale oo ku dhow oo ay rasaysan yihiin faylal. Xaaladdu wax yar ayey iska beddeshay sidii ah ahayd booqashadaadii hore ee aad ku samaysay isla xafiiskaas bilo yar ka hore. Sida muuqata, wax aan fidsanayn ayaa laga qabtay dhimidda culayska shaqada. Dhacdada 2aad Waxay dacwadi kaaga timid qof xaafadaha kuu dhow deggan. Intii ay isku dayeysay waaxda caafimaadka magaaladu inay u nadiifiso baytal maygeeda godka ah, waxa loo sheegay shaqadaasi inay qaadanayso muddo saddex todobaad ah, sababtuna ay tahay ogolaansho dhowr ah oo looga baahan yahay xafiisyada maammulka ee kala duwan. Dhacdada 3aad Xubin Golaha Degaanka ka tirsan oo cusub waayo-aragnimo shaqana u leh xisaabaadka ayaa ku warbixisay inaan awood-qaybini oollin xafiiska khasnajiga. Bacdamaa ay tahay xubin dhowaan la soo doortay, waxay codsatay in loo sheego tallaabada laga qaadi karo xaaladdan liidata ee xil-qaybinta ah. Dhacdada 4aad
Dhowr qof oo booqasho ku tegay Dawladda Hoose ayaa faallo ku bixiyay marar kala gaar ah in ay ka waayeen shaqaalaha xafiisyadoodii iyo wakhtiga laga rawaxo shaqada horteedba. Dhacdada 5aad Qof ganacsade ah ayaa Golaha Degaanka hor yimid isagoo ku dacwoonaya inuu dadaallo aan kala go’lahayn sameeyay si uu lacagtiisii u helo ahayd qiimaha qalab lagu dhisay laami (waddo) asphalt ah alaabadaas oo laga soo iibsaday bilo dhowr ah ka hor, ha yeeshee, ilaa hadda aan la siin.
11.4 Diraasad Xaaladeed: WAX-KA-BEDELKA QAABKA XAFIISKA SHAQAALAHA EE CROPTOWN
Waqtiga loo baahan yahay: 60 – 75 daqiiqo Ujeeddo Diraasadda xaaladdan waxa looga danleeyahay in lagu bandhigo waxa dhici kara marka oday golaha deegaanka ka mid ah oo dhowaan la soo doortay uu u isticmaal jagada uu hayo/ay hayso iyo waaya-aragnimada xirafadeed inuu ku dirqiyo waxka beddelid shaqaale diidan oo ka tirsan dawladda hoose.
Hab-raaca Waxaad guddoonsiisaa ka qaybgale kasta naqil xaalad loo yaqaan “wax ka beddelka qaabka xafiiska shaqaalaha ee Croptown”. Waxaad weydiisataa ka qaybgalayaasha inay akhriyaan xaaladda. Markay bogtaan akhriga xaaladda, u qaybi kooxo yar-yar oo afar ama shan ah. Koox walba waxaad ka codsataa inay ka jawaabaan su’aalaha saddexda ah ee ka dambeeya xaaladda oo ay kuu keenaan jawaabaha qiyaastii 20 daqiiqo dabadood. Markay kooxaha yar-yari kuu yimaaddaan, koox kasta waxaad weydiisaa siday wax u qabatay ama siday uga jawaabi lahayd mid kasta oo ka mid ah saddexda su’aalood. Waxaad dhiirrigelisaa wada xaajood guud iyo is garab dhigid ah qodobada fikradaha.
WAX-KA-BEDDELKA QAABKA XAFIISKA SHAQAALAHA EE CROPTOWN Xaaladda Croptown waa xarun weyn oo suuqeynta iyo qaybinta ku lug leh tirada dadka ku nooli na ay tahay 50,000 oo qof, wxaanay ka mid tahay gobolada ugu dhul beereedka badan dalka. Ilaa beri dhoweyd, dawladda hoose ee la mid ah Golaha Deegaanka magaalada Croptown waxay u shaqeyn jireen sidii oo ay yihiin wakiillo ay leedahay dawladda waddankaai, taasoo ay lahaayeen awood aan sidaas u sii weynayn. Dhaqan ahaan, siyaasadaha waxa lagu soo samayn jirey dawladda dhexe waxaana ku hawlgeli jirtey xukuumadda hoose, markii sannado badan la soo maray dawlado masuuliyad daran, musuq iyo dhaqaalo xumo ku yimaadda tuulajoogga iyo dadka ku nool magaalooyinka yar-yar, dareenkii cadho ee dadweynaha ayaa si xoog leh ugu kacay dawladda dhexe waxaanu keenay in dawladdii ay ku dhaqaaqdo arrin cusub oo harumar leh lagana meelmariyey magaalo madaxda. In ka yar lix bilood, ayaa xeerar badan oo loogu yeedho kuwa is-maamulka ay dejiyeen guurtida cusubi, kuwaasoo watay awoodo wax xaadhaya oo is-xukun hoose ah oo lagaga dhaqmo dalka dhammaantii. Waa cusub ayaa u baryey Croptown, ha yeeshee, isbeddelkii wuxu noqday mid aan sallaxnayn oo aan dhibaato ka xor ahayn/aanay ka fogayn sida lagu soo bandhigi doono xaaladda. Peter Malla waxa dhowaan loo doortay xilli laba sano ah inuu ka mid ahaado xubnaha Golaha Magaalada ee Croptown.
Waa ganacsade iyo guddoomiye ku xigeen masuuliyad wadaag leh u haya xafiiska shaqaalaha ka ganacsada tuulka/qalab gacmeedka ee shirkadda beeraha oo waddani ah, waxaanu xil ka hayaa xafiiska kale kana yahay sarkaal markii ugu horraysay la soo doortay. Malla xubin gole ahaan, waxa laga soo doortay degmo leh meherado aan waa-weynayn tiradoodu se ay badan tahay. Waxay u arkeen taageerayaashiisu inuu yahay murashax/tartame isbeddel wacan keeni kara, ballan qaad kiisuna wuxuu ahaa inuu u hawlgalo karti badnaan iyo dhaqaale badan in laga helo dawladda hoose ee Croptown. Ganacsigiisa gaarka ah marka uu wado, Oday Malla waa mareeye dabeecad adag, wuxu ku jahaysan yahay in wax walba deg-deg iyo karti badnaan loo qabto. Shaqaalihiisa iyo shuraakihiisa ama gacan yara yaashisu waxay u hayaan tixgelin/xaqdhawr halka ay uga hayn lahaayeen kalgacal. Sababaha loogu soo doortay golaha Croptown waxa ugu waaweynaa karti badnaantiisa ganacsi ee may ahayn xirfadaha uu dadka kula shaqaysto. Tan iyo xilligii la soo doortay, Oday Malla, kol wax kabadan, ayaa afkiisa laga maqlay sidatan “weli iskamaaan dhigin nin siyaasi ah, waxaan u dhaafaa arrimaha siyaasadda duqa”.
………………….ee ugu horreeyey qaar aad wax ugu iftiiminaya/ugu kordhinaya. Iyadoo ay ugu wacan tahay khibradiisa ganacsi, Malla wuxu judhiiba gooni ula soo baxay qaabka xafiiska shaqaalaha ee dawladda hoose ee Croptown inuu aad ugu fiiro yeesho. Wuxu xiisa aad ah u hayey qaabka mushaharooyinka iyo gunnomaalineedka, xubintaas oo uu islahaa aqoontiisa iyo khibradiisa ayaa si gaar ah ugu bisleeyey inuu qiimeeyo. Wax yar ka dib wuxu ka helay mushahaarooyinkii waxyaalo badan oo aan isleekayn/cadaalad ku salaysnayn. Wuxu ogaaday mashkiladdu inay tahay qaabka oo lagu soo shaqaynayey sannado badan, aan dib loo eegin/nakhtiimin si uu u daboolo baahiyaha dawladdan gudanaysa adeegyada cusub ee badan iyo xilalka. Murugsanaanta dhibaatadan darteed, Malla wuxu go’aansaday in qiimayn debedeed oo lagu sameeyo qaabka xafiiska shaqaalaha ay tahay in loo xilsaaro shirkad maamul. Sidaas awgeed, wuxu shaqada qortay xubin shaqaale ah oo aqoon leh, kaasoo ka tirsanaa machadka maamulka dawladda oo ka qayb ah Jaamacad meel dhow ku tiil, si uu diraasad u galo. Diraasad laba bilood qaadatay ka dib markii uu hawlo hanti dhowrka ku lug leh oo ballaadhan galay, xubintii shaqaaluhu wuxuu ku taliyey dib u habbayn guud oo lagu sameeyo jagooyinka iyo mushaharka oo sal looga dhigo qaabka xil-gudashada ee hawlaha la xidhiidha. Oday Malla wuxu nuquladii warbixinta machadka u diray Golaha Magaaladda isagoo soo jeedinaya in la qaato/lagu dhaqmo. Kadib markii wada hadal kooban uu ka yeeshay warbixintii iyagoo shir caadi ah fadhiya, goluhu wuxu ku ansixye/ ku ogolaaday arrinkaas codad ah afar uu ka dhan yahay mid 4/1.
Isla maalintii xigtay, Oday Malla nuquladii warbixinta wuxu u gudbiyey karraaniga Magaalada, taasoo uu u raaciyey waraaq ku amraysay inuu u qaybiyo maamulaha xafiiska shaqaalaha iyo madaxda waaxaha oo dhan faraysana in lagu dhaqmo qaabka cusub, sida suurtogalka ah ee ugu dhakhsaha badan. Wuxu caddeeyey inuu qaabkan cusubi la iman doono isbeddelo loo baahan yahay oo lagu sameeyo hannaanka loo warbixiyo, kala saarida mushahaarooyinka, iyo sharaxa/ ka jawaabidda barnaamijka. shaqaalihii dawladdu way ka war heleen in diraasad la sameeyey, hasayeeshee, may ogaan waxay ku saabsanayd ilaa manta waxa galay dareen cadho iyo baqe isugu jira. Kuwii ku fadhiyey jagoojin wax laga bedelayo dhinaca masuuliyadda amase mushaharka way ka xumaadeen. Waxay u barteen arrimuhu sidii ay ahaayeen ama loo qaban jirey waxaanay ka sii naxeen hubanti la’aanta shuruudaha cusub. Qaarkood waxay ka cawdeen inaan qorshaha cusub ee mushaharooyinku wax tixgelin ah siin xagga mudnaanta iyo sannado badan oo adeeg daacadnimo ah loo hayey keenina karo cadaalad darrooyin cusub. Isagoo shir kula jira Karraaniga Magaalada maalmo yar ka dib, Oday Malla waxa loo sheegay dhaqan gelinta qaabkii cusbaa inay dhibaato soo gaadhay. Qaar ka mid ah kuwii ugu hadalada cad-caddaa madaxda waaxaha ayaa waxay gaadheen heerar ay yidhaahdaan qaabka cusubi wuxu keenayaa dhibaatooyin halkii uu xalka ka noqon lahaa. Malla argagax ayuu qaaday.
Wuxu fahmi waayey sababta qaab si aad u taxadir leh looga baaraadegay/looga soo shaqeeyey si loogu unko/curiyo hawlaha dawladda hoose hawlkarnimo iyo dhaqaale soo kordha iyo sixidda cadaalad darrada ku jirta xilsaaridda shaqooyinka iyo mushahaarooyinka, inay la kulanto caabbi/ka horimaad noocaas ah.
Su’aalo 1. Ka wada hadla habboonida dedaaladda Oday Malla uu ku dhaqaaqay si uu hare ugu dhigo qaabka xafiiska shaqaalaha. 2. Muxuu ahaa malaha ku dhaqaajiye Oday Malla dadaaladiisa ahaa inuu hagaajiyo qaabka? 3. Maxay ahaayeen is moodsiisyadii khuseeyey doorarka golaha iyo shaqaalaha markii hore loo dhigayey hay’adda ee ka tarjumay/ugu wacnaa ka hor imaadkii shaqaalaha ee ku wajahnaa dedaaladii odayga? 4. Maxay kale ayuu qaban lahaa Oday Malla haddii uu rabo inuu gaadho wax hagaajinta loo baahan yahay?
11.5 layli:- GORGORTANKA KAALINEED EE GOLAHA SHAQAALAHA Wakhtiga loo baahan yahay: 120 daqiiqo
Ujeeddo: Layligani wuxuu siiyaa ka qaybgalayaasha khibrad iyagoo isticmaalaya istiraatijad gorgortan oo hawl kar ah, taasoo ay ku xalilayaan iska hor imaadyada amase waxyaalaha aan caddayn ee muranka dhaliya ee u dhexeeya odayaasha golaha iyo xubnaha shaqaalaha.
Habraaca Waxaad ku bilowdaa layliga inaad xasuusiso ka qaybgalayaasha in dadka ka shaqeeya hay’adaha ee leh doorar kala jaad ah oo ay ciyaaraan/galaan inta badan waxay is arkaan iyagoo iska horimaad ku jira. Inkastoo waxaan la hurayn ay ku tahay nolosha hay’adda ( intay hay’addu jirto),haddana iska horimaadku waa inaanu noqon mid wax dumiya. Istiraatijiyo badan ayaa jira oo kaalmaynaya kooxaha isku tiirsan si ay uga heshiiyaan ammuuraha ay isku hayaan, si ay awooddooda uga duwi/leexin lahaayeen hawsha ka adkaanta qof uguna jahayn lahaayeen shaqo hay’adeed oo wax soo saarta.
Waxaad sii wadataa tilmaanta ka wada xaajoodka door adigoo u kala saaraya hawl ah lix kaabadood markaad xalilayso iska horimaadka doorka. Kaabadahaasi waxay ku muujisan yihiin bogga kan xiga, kuwaas oo la badin karo si loo siiyo ka qaybgalayaasha. U sharax inaad u qaybin doonto ka qaybgalayaasha laba kooxood, koox ka mid ahi ay ciyaari doonto doorka odayaasha golaha halka ay ta kalena geli doonto kaalinta shaqaalaha dawladda hoose. Labada kooxood waxa lagu curin karaa iyadoo ka qayb galayaasha la kala siiyo tirooyin ka bilaabma kow oo xidhiidh ah ( 1,2,3,4,5,…….), adigoo ka codsanaya inuu nin kastaaba xasuusto tirada la siiyey. Ka qayb galayaasha ay ku soo beegmeen tirooyinka laba u qaybsama waxay masali doonaan xubnaha golaha layligan dartii, ka qayb galayaasha ay ku soo hagaagaan tirooyinka aan waxbaba u qaybsamin waxay ahaan doonaan shaqaalihii. Ka qayb galayaashu markay fahmaan kooxaha ay ka tirtsan yihiin dabadeed ooay akhristaan xaashiyaha gacanta loo geliyey, wax yar oo waqti ah sii ay su’aaloiska weydiiyaan hawsha iyo doorarka ay ka ciyaari doonaan. Markay ka qayb galayaashu diyaar noqdaan, koox walba waxaad siisaa xidhmo ah waraaqaha khafiifka ah ee joornaalada lagu daabaco,maarkaro ( Markers) caaro suuf ah leh, iyo meel sanqadh yar oo ay ku shaqeeyaan iyagoo waxoogay isku jir jira.
Waxaad u soo jeedisaa koox kastaaba inay iska doorato/magacawdo warbixiye /rikoodh gareeye (sajile) iyo waqti-ilaaliye. Waxaad bilowdaa hawsha gorgortanka. Waqtigaagu ha u qaybsamo labada kooxood intay gooni-goonida u shaqaysanayaan. Waqtigaagaas waxaad isticmaashaa inaad ka jawaabtid su’aalaha ku lug leh hawsha waxaanad ku adkaysaa ka qayb galayaasha inay si dhakhso leh ugu tallaabsadaan hawlaha loo dhiibay. Markay ka qayb galayaashu bogaan hawsha ka wada xaajoodka kaalineed ee lixda kaabadood ah, waxaad u horseedaa ka faalootan/naqdi aad ku samayso layliga, adigoo su’aalaha soo socda u isticmaalaya hagitaan wada hadal: 1. Hay’adiinu ma leedahay nidaam habaysan oo ku saabsan wada xaajoodka iska hor imaadka door ee u dhexeeya golaha iyo shaqaalaha? (Waxaad weydiisaa ka qayb galayaasha yidhaahda way leedahay hay’adayadu inay tilmaan ka bixiyaan qaabka ay isticmaalaan iyo goorta). 2. Maxaad ku tilmaami kartaa inay yihiin dhinacyada nidaamkaas ugu xooggan iyo kuwa ugu liita, istiraatiijiyad gorgortan kaalineed oo u dhaxaysa golaha iyo shaqaale ahaan? 3. Maxaa la yeeli karaa/la qaban karaa marka la rabo in lagu dhaqan geliyo nidaam gorgortan kaalineed oo kan oo kale ah hay’addiina?
GORGORTAN KAALINEED: HABRAAC LIX DHUDOOD AH Tallaabada Koowaad Waxaad ku taxdaa waraaq ama laba ah nooca khafiifka ah ee joornaalada lagu daabaco arrimaha kooxda kale ay ku kacdo ee kaa cadhaysiiya. Tusaale, haddii aad tihiin koox odayaal deegaan ah, liiskaaga waxaad gelisaa waxyaabaha kaa dhirfiya ee aad ku aragtay shaqaalaha, sida hoos ku muujisan: x x x
Lagama helo xafiisyadooda markaanu soo wacno ama aanu nimaadno anagoo war raadinayna; Dhif iyo adir ayey nooga soo warbixiyaan halka ay marayaan/inta la soo gaadhsiiyey mashaariicda muhiimka ah; Had iyo goor waqti dheer ayey ku qaadataa si ay hawlaha u gutaan, aanay ahayn inay ku qaadato.
Dhinaca kale haddii aynu jalleecno, haddii aad tihiin koox shaqaale ah, waxaad ku darsan kartaa liiskaaga waxyaalaha kaa cadhaysiiya ee ay ku kacaan odayaasha deegaanku, sida hoos ku cad: x x
Waxay go’aamada gaadhaan iyagoo aan wax war ah amase talo aan na weydiin; Waxay jebiyaan ama ku xad gudbaan “silsiladda amarka” iyagoo u dhiibaya xilalka shaqaalaha heerarka hoose ah oo aan marka hore la la talagelin madaxda qofka shaqaalaha ah;Waxay noo dhiibaan shaqada mashaariicda iyagoon ka fekerin/ka fiirsanin waxaanu hawlo gacanta ku hayno.
Tababarka Hoggaanka la soo doorto 37
Qiyaastii 30 daqiiqo ka dib, waxaad la kulantaa kooxda kale. Waxaad u dirtaa afhayeenka kooxda inuu ku dhejiyo gidaarka waraaqaha jilicsan ee kooxda, waxaanad soo bandhigtaa liiska kooxda ee ay ku qoran yihiin waxyaabaha lagaga cadhooday kooxda kale, iyadoo arrin walba laga bilaabayo erayadatan, “waxyaabaha na cadho geliyaa ee khuseeya golaha/shaqaalaha waxa weeye……….” Warbixintaadu waa inaanay qaadan waqti ka badan shan daqiiqo. Inta warbixinta lagu jiro waa inaan la gelin wax wada hadal ah. Marka aad bogatid warbixintaada, dhegayso afhayeenka kooxda kale marka uu warbixinta sheegayo.
Tallaabada Seddexaad Markay dhamaadaan warbixinaha kooxuhu, ku noqo goobta kulanka si aad u diyaariso liis codsiyaal ah oo aad ka doonayso kooxda kale. Codsi kastaaba waa inuu ku lug leeyahay dhaqannada cadhada dhallin kara mid ahaan oo aad kala soo baxdo liiskaaga. Tusaale, haddii kooxdaadu ay ciyaarayso doorka odayaasha deegaanka, waxaad ka codsan kartaa kooxda masilaysa doorka shaqaalaha inay ka sameeyaan warbixino joogto ah halka ay marayaan dhammaan mashaariicda loo dhiibay shaqaalaha ee goluhu u xilsaaray. Codsiganu wuxuu khusaynayaa werwerka ay shaqaaluhu mar-mar iyo dhif uga warsheegaan golaha xaaladda xilligaas taagan ee mashaariicda muhiimka ah.
Haddii kooxdaadu ay ciyaarayso doorka shaqaalaha, waxaad ka codsan kartaa kooxda masilaysa doorka odayaasha golaha, in odayaasha raba in hawlo loo dhiiboshaqaalaha ay marka hore wixii la qaban lahaa si cad isula gartaan madaxda shaqaalahaas. Codsigani wuxu daweynayaa werwerkii shaqaalaha ee ahaa odayaashu waxay isku deyayaan inay ku xadgudbaan silsiladdii amarka. Sidii hore ba loo yeelay, liisaska codsiga waxa lagu diyaarinayaa waraaqihii khafiifka ahaa ee joornaaladda. Diyaarinta codsiyaashu waa inay qaadato qiyaastii 30 daqiiqo. Tallaabada Afaraad Muddo 30 daqiiqo ah gudahood, waxaad la kulantaa kooxda kale. Haddii aad ka tirsan tahay kooxda golaha, waxaad ku dhejisaa gidaarka waraaqihiinii jilicsanaa, soona bandhiga liiskiina codsiyada. Haddii aad tahay kooxda shaqaalaha , dhegayso kooxda kale markay bandhigayaan liiska codsiyada. Dabadeedna sida kale u rog nidaamka/cuyub u celi. U dir xubin ka mid ah kooxdaada inuu qoro erayada codsi kasta oo aanay waxba ka dhinnayn ee kooxdaada ku socda. Kaabaddani waa inay qaadato 10 daqiiqo. Tallaabada Shanaad Markay labada kooxoodba warbixintooda bogaan ( waa inay qaadato qiyaastii 10 daqiiqo) waxaad ku noqotaa goobtaadii shirka si aad uga jawaabto codsi walba oo ku socday kooxdaada kana yimid kooxda kale. Waxaad ku jirtaa qiyaas ahaan 30 daqiiqo inaad kaga jawaabtid codsi kasta oo ay sameeyeen kooxda kale. Waxaad ku bilowdaa jawaab kasta oo aad leedahay hababka soo socda mid ahaan:
1. waanu yeeli karnaa (wixii la codsaday) si hawlyar anagoo……… ( sii wad adigoo faahfaahinaya waxaad diyaar u tahay inaad qabato si aad codsiga u fuliso). 2. Raalli ayaanu ka ahaan lahayn inaanu idiin qabano ( waxa la codsaday) haddii aad idina geestiina ka raali noqon lahaydeen inaad ……. (dhammaystir adigoo sharxaya waxa aad rabto dhinacooda inaad ka heshid kooxda kale). 3. Ma qaban karno arrinkaas ( wixii la codsaday) sababtoo ah……… ( sharax sababta qabashada waxa kooxda kale ay idinka doonayso inaad fulisaan aanay u
Tallaabda Lixaad Marka liiskiina jawaabaha ee codsiyada kooxdiina loo soo gudbiyey ee ka yimid kooxda kale ay dhamaadaan,ku biir kooxda kale. Waxaad bandhigtaa liiska kooxdiina ee jawaabuhu ku qoran yihiin, adigoo isticmaalaya waraaqaha joornaalka ee gidaarka ku dheggan, waxaanad diyaar u ahaataa inaad falanqayso sababaynta jawaab kasta. Kooxda kalena waxay samayn doonaan sidaas oo kale.
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hayâ&#x20AC;&#x2122;ad Dhise Tababarka Hoggaanka la soo doorto
11.6 Dood Hagan: QIIMAYNTA SHAQAALAHA Ujeeddo: Layligani waa inuu horudhigo wadaagga khibradaha ka qaybgalayaasha marka la qiimaynayo waxqabadka ku lug leh shaqaalahooda maamulka.
Habraaca Ku martiqaad ka qayb galayaashu inay si tamar leh uga qayb qaataan wada hadal ku saabsan siyaabo kala duwan oo loo qiimeeyo shaqaalaha maamulka ee dawladda hoose. Ka dooro xunbo dhowr ah si ay u noqdaan hoggaamiyayaal wada hadal. Sii hoggaamiye kastaba oo lala soo baxay su’aalaha hoos ku yaalla mid ahaan si uu uga dhigto mowduuciisa/ceeda ay ka hadli doonto.
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Hay’ad Dhise Tababarka Hoggaanka la soo doorto
1. Xubintee ka tirsan dawladdiina hoose ayaa goluhu uu qiimeeyaa? Miyey jiraan dar kale oo ay tahay in goluhu uu qiimeeyo? kuwee ayey yihiin? 2. Imisa jeer ayaa qiimaynahaas la qabtaa?Imisa jeer ayey tahay in la qabto? Mudada u dhaxaysaa ma inay kala duwanaataa oo shaqaalaha qaar ba waqti uu u kala dhex-dhexeeyo?Dabeecadda/dhaqanka qofka shaqaalaha ah, wanaag ama xumaan, miyey tahay inay wax ku kordhiso inta goor ee ay qiimayntu dhacayso? 3. Hannaankee ( heerkee ayuu u qabtaa)ayaa goluhu uu ku dhaqmaa markuu saarayo waxqabadka shaqaalaha la qiimaynayo? Haddii lagu odhan lahaa soo diyaari heerka lagu qiyaaso waxqabadka shaqaalaha oo joogto noqda,maxaad ka dhigi lahayd? ( ku qor xaashiyihii joornaalka). 4. Sidee ayaad ugu qanacsanayd natiijooyinka qiimayno aad ka qayb qaadatay oday deegaan ahaan? Maxay ahaayeen dhinacyada ka sareeyey caadiga? Maxaa caddeeya/daliil u noqda guusha? Maxay ahaayeen dhinacyada gaadhi waayey caadiga(Average)? Maxaa caddaynaya/ka warramaya natiijooyinka niyadjabka leh? Maxaa loo qaban karaa sidan si ka duwan doorka dambe? Waxaad ka codsataa hoggaamiyayaasha wada hadalka in ay hore u soo dhaqaaqaan iyagoo tixgelinaya nidaamka/sida ay u soo kala horeeyeen.waxaad soo jeedisaa inay is weydiiyaan su’aalaha loo dhiibay dhammaantood. Waxa kale oo aad soo jeedisaa inay is weydiiyaan wax allaale wixii su’aalo dheeraad ah ay raacinayaan ee ay is leeyihiin waa la qaadan karaa oo qodob wax ku kordhinaya ama dhiirigelinaya fikrado kale. Isticmaalka su’aalaha goorma? Halkee?Maxay?Sidee?Waayo?iyo Kee? Marka aad damacsan tahay soo gelinta su’aalo dheeraad ah waa hab wacan oo wax lagu dhaqaajin karo. Intaadan bilaabin, waxaad xasuusisaa hoggaamiyayaasha wada hadalka inay u qorshe yeelaan waqtigooda (qiyaastii 15 daqiiqo mowduuciiba). Waxaad u gashaa halkii waqti-ilaaliyaha afarta wada hadal ba.
Aqoon is waydaarsi Waxaan xilli xilliyada ka mid ah lahaa lix nin oo ii adeega, waxay i bareen waxa allaale waxaan aqoon leeyahay; magacyadoodu waxay kala ahaayeen halkee, goorma, waayo,maxay iyo sidee iyo kee. - Rudyard Kipling
11.7 LAYLIGA XIRFAD GUDBINTA
Ujeeddo: Layligan waxa loo la jeedaa in laga caawiyo/taageero ka qayb galayaashu inay gudbiyaan/ku dabbaqaan aqoonta ay ka korodhsadeen aqoon-is-weydaarsiga hawlahooda rasmiga ah madax la soo doortay ahaan waxa xooga amase dareenka la saarayaa waa kor u qaadidda filitaanada, ku hawlanaanta qorshayn run ah, iyo ballanqaadyada (nidarada ) qofnimo. Shaqada inteeda badan waxa loo qabanayaa qof-qof oo ay weheliyaan waxaan fidsanayn oo ay ashkhaastu arrimo-wadaag yeelanayaan. Garashada iyo wax qabashada waxa u dhexaysa Waxa guud ahaan la iskubohol raacsan yahay danta laga leeyahay tababarka inay tahay aad u ballaadhan in la wacnaysiiyo habka ay dadku wax u qabtaan,adigoo tusaya hab ka wacan. Siday xaqiiqadu tahay, guusha khibradda tababarka waxa laga qiyaasi karaa koboca qofnimo intuu leegyahay iyo isbeddelka dhaca/la arko inta tababarka lagu gudo jiro iyo kolka tababarku dhamaadaba.
Tababarku mar-mar iyo dhif ayuu saamayn ku yeeshaa ka qayb galayaasha aqoon is weydaarsiga ,taasoo tababarayaashu ay rajeeyaan inuu ku yeesho, gaar ahaan markay moogaadaan ama ka sii maqanaadaan saacado yar oo qudha. Riyaaqa/farxadda weyn ee ay la yimaaddaan goobta aqoon is weydaarsigu si dhakhso leh ayey u gudhaa/u shiiqdaa markii qofkii tababarnaa uu ku soo laabto dhaqamadii hore ee shaqada iyo xintanka(resistance) jilayaasha/rafiiqyada shaqada ee aan ka qayb qaadan waaya-aragnimada tababarka. Dhinaca kale haddii la jalleeco, la qabsiga/u nuglaanta barashada iyo is beddelka ay isku arkaan marka uu soo afjarmo aqoon is weydaarsadku waxay ka caawin karaan inay ka gudbaan barasho-nacaybkii hore ugu jiray iyo jawigii shaqada ee ay waagii hore ku jireen. Tababaruhu wuxu ka teegeeri karaa tababar galayaasha inay ka guuraan/ka digarogtaan si ay guuli ku jirto caalamkii(duniddii) barashada/aqoon korodhsiga oo ay u digarogtaan dunida waxqabadka, taasoo uu ka siin karo carbisyo qorshe oo fudud. Waqtiga lagu qaatay in lagu dhiirigeliyo gudbinta aqoon korodhsigu waxay noqon kartaa faraqa u dhexeeya daawadsiin/u bandhigid kooban oo ku saabsan fikrado xiiso leh iyo waayo-aragnimo isbeddel nololeed kuu horseedda.
Habraaca Waxaad ku qaadataa ugu yaraan saacad badhkeed soo xidhitaanka aqoon is weydaarsiga, adigoo xoogga/dareenka saaraya inay ka qayb galayaashu u soo jeestaan barashooyinka muhiimka ah kuna dhiirrigeli inay sii wadaan ku tijaabinta waxyaalaha ay soo barteen hawlaha golahooda. Ku bilow inaad siiso ka qayb galayaasha qiyaas ahaan15 daqiiqo in si qof-qof ah/qof waliba goonidii uga shaqeeyo weydiino la buuxinayo meelaha bannaan oo ku lug leh gudbinta barashada sahlan. Markay ka qayb galayaashu bogaan buuxinta foomka weydiimaha(questionnaire), waxaad weydiisataa inay kala qayb galaan kooxda laba arrimood amase saddex ay damacsan yihiin inay u qabtaan si ka duwan sidii hore xagga doorarka golahooda dhisaaal-hay’adeed ahaan si loo afjaro aqoon is weydaarsiga.
SU’AALO LEH MEELO BANNAAN OO LA BUUXINAYO KUNA SAABSAN GUDBINTA AQOONTA. Waxaad ku qaadataa daqiiqado yar inaad soo iftiin-celisid/xasuusatid kaalinta hay’ad-dhisaha, fikradaha cusub ee aad kala kulantay aqoon is weydaarsigan, iyo sida ay kula yihiin. Dabadeed, meelaha bannaan ee hoos ka muuqda, waxaad ku qortaa weedh ama laba adigoo tilmaamaya waxa ku xiiso geliyey ee aad uga baratay naftaada mudadii aqoon is weydaarsigu uu socday.
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Adigoo ku salaynaya wixii aad naftaada ka korodhsatay iyo suurtogallada badan inay wax is beddelaan ee lagu bandhigay aqoon is weydaarsigan, maxay yihiin labada amase saddexda arrimood ee aad ku talojirto inaad sidii hore si aan ahayn u qabato dhinaca doorka golahaaga deegaan hay’ad-dhise ahaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Ugu dambayntii, maxay yihiin carqaladaha naftaada amase jawiga shaqadaada ee aad filayso inay kaa hor yimaaddaan, marka aad ku jirto dedaallo la xidhiidha dhaqan-gelinta isbeddeladaas? Maxaad qaban doontaa si aad meesha uga qaaddo amase aad u dhintid carqaladahaas? __________________________________________________________________ Carqaladda 1.__________________ 2.___________________ 3.___________________
Tallaabada aad meesha kaga qaadayso carqaladda 1.__________________ 2.__________________ 3.__________________
44 Haddii aad wax baran karto, wax waad qaban/gudan kartaa
XARUNTA QARAMADA MIDOOBAY EE DEEGAAMADA AADAMAHA ( HABITAT)
S.BOOSTA 300030,NAIROBI,KENYA Tilifoon: (254-2) 621234,Telex:22996 UNHAB KE,Cable:UNHABITAT FACSIMILE: (254-2) 624266/7 (Central Office),624262(ADM),623263/4(TCD),624265(RDD).
PRIORITY ONE WORDS SOMALI ENGLISH 1. Accountability 2. Action plan 3.Active Listening
-Xisaabtan -Xilkaa Saaran yahay -Qorshe hawleed. -Wax-qabad hawleed -dhegaysi feejigan -Dhegaysi Darban -Dhegaysi Mug leh. -Kala Doorasho -Wax bedeli kara wax kale -Arji Codsi Adeegsi -Qiyaasid -Qiimayn -Suldada -Awood xukun - Wacyi-galin -Ka war qab -Wax-barasho Asaasi ah. -Dan ku Qabe -Ka faaâ&#x20AC;&#x2122;iidayste -Kobcin wax Qabad -Awood dhisid. -Daraasad Xaaladeed -Liis Hubineed -Madani -La xiriira magaalo -muwaadin -Gacan siin -Wada shaqayn -Is Caawimid -Guddi -Gaarsiiye -Isgaadhsiiye -Beel
19.Community Development 20.Concepts
-Jaaliyad -Horumarin Beeleed -Horumarin Jaaliyadeed -Figrado -Aragtiyo
21.Conceptual Hat Rack
-Figrada Metalaada Xilaalka
-Is-qabad/Khilaaf - Iska hor imaad -Rayi la isku raacay Aqbalaad figrad guud -Natiijo -Cawaaqib -Dagaan Doorasho -Iskaashi Wada shaqayn Gole Xil-dhibaan Degaan Xubin ka tirsan Gudiga degaanka -Maax Dumin -Lid ku ah. -Cabirka wax lagu saleeyo Qoddobbo wax lagu saleeyo. -Wax lagu Saleeyo -Goaâ&#x20AC;&#x2122;aamiye -Qeexid. -Wefti -Ergo -Demoqraadiyad -Tilmaan -Sifo -Sharax -Wada Hadal -Wax ku ool -Sidii la rabay wax u tarid. -Hogaaminta wax ku oolka ah. -Wax qabad fiican leh -Hogaaminta la doortay
23.Consensus 24.Consequently 25.Constituency 26.Co-operation 27.Council 28.Councilor 29.Counter productive 30.Criteria 31.Criteque 32.Decion Maker 33.Definition 34.Delegation/Delegate 35.Democracy 36.Description
37.Dialogue 38. Effective 39.Effective leadership 40.Effeciency 41.Elected Leadership
42.Empower/Empower -Awood siin ment -Awood u fasaxid 43.Enabler/Enable -Awood siin -Karti siin 44.Essay -Qormo -Maqaal 45.Ethical -Hab-dhaqan 46.Evaluation/Evaluate -Qiimayn 47. Evaluation Survey -Qiimayn Sahan -Baaritaan qiimayneed 48.Exercise -Layli 49Facilitator Fududeeye/Sahle 50.Feed back War Celin Jawaab Celin 51.Financier -Masuul Maaliyadeed. 52.Gender -Jandar 53.Goal -Hadaf -Gool 54.Good Governanace -Hab Xukun Wanaagsan -Hab Maamul 55.Government -Xukuumad 56.Group Discusion -Dood kooxeed 57.Guide -Tilmaamid -Hage 58.Hand Book -Tilmaan Bixiye -Tilmaame Bare. 59.Human Resources -Khayraadka Dadka 60.Human Settlement -Degsiimooyinka Aadanaha Degaamayn 61.Implementation -Hirgalin -Fulin 62.Information -Xog -Wargelin 63. Institution -Haya’ad 64. Institution Builder -Haya’ad Dhise 65.Institionalize -Haya’deeye 66.Instruction -Amar -Wax barasho -Wax barid
-Qoddobbo Muhiim ah. Qoddobbo Ma Dhaafaan ah 68.Leadership Process -Geedi socod Hoggaamineed 69.Learning -Barasho -Wax Barasho -Tacliin Barasho 70.Learning Objective -Ujeeddooyinka Barashada Yoolka Barashada 71.Local -Dawladda Hoose Government/Authority 72.Majority
-Aqlabiyad -Inta Badan 73.Management Process -Geedi Socodka Maaraynta 74.Meeting
-Kulan -Shir 75.Minority -Inta Yar -Laga tiro yar yahay 76. Minutes -Hadal Qor -Hadal qoraal 77. Mission -Ergo -Risaalo 78. Monitoring -La socod -La saan qaad 79. -Wada Xaajood siiye Negotaition/Negotiator -Wada Hadal siiye -Gorgoriye 80. Networking -Shabakadeyn/Nidaam hawleed oo wada shaqaynaya 81.Organization 82. Over seer 83. Over view 84. Participants
-Urur -Korjooge -Dulmar/Guud Mar -Ka-qayb-galayaasha/Kaqaybqaatayaasha
85. Perception 86. Performance 87. Perspective 88. Policy 89.Policy Maker
-Faham/Dhugmo/Garasho. -Waxqabad/Fulin Hawleed. -Ka eegid wajio kala duwan. -Qorshe Hawleed/Khidad/Siyaasad -Siyaasad Dejiye
90. Power Broker
-Awood wax ku qabte/Awood adeegsade
117.Training Material. -Agabka Tababarka 118.Traing assessment. 119.Transparency.
Need -Qiyaasid Tababarka/Qiimeynta Tababarka -Wax qaris laaâ&#x20AC;&#x2122;aan
120.Transparent 121.Unanimous 122.Vision. 123.Warm up exercise 124.Workshop. Priority two words. 125.Acknowledgment 126.Administrative Fixes.
-Qof aan waxba qarinaynin. -Loo dhan yahay/Gedigood. -Aragti fog/Aragti dheer -Iskulalayn/Qandhicin/Diiran -Aqoon Isweydaarsi. -Garwaaqsi/Garawsi/Mahad-celin -Adeegsi
127.Analysis -Gorfeyn/Falanqeyn/Taxliil. 128.Assignment. -Shaqo Mucayin ah 129.Assuption -Maleyn/Si u qaadasho 130.Benchmark -Bar qiyaaseed/Bartilmameed 131.Challenges -Caqabad/Loolan/Hardan 132.Collective -Kooxeed/Urureed/Wadareed 133.Conceptual frame -Gadaan-fikradeed/Aasaas fik work 134.Constructive 135.Conventional Wisdom
143.Infrastructure 144.Input. 145.nsight. 146.Inspiration. 147.Interaction. 148.Judgement 149.Land Use Malaise. 150.Multipurpose 151.Output. 152.Potential Candidate 153.Pre-training.
-Dhismo-hooseed. -Wax galin -Aragti Maskaxeed. -Maan-godlin/Ra’yi fiican helid. -Isdhex-gal/isla fal-gal/Isku dhafmid. -Xukun/Go’aan -Aafada dhul boobka/Dhul ku habsa -Ujeeddo badan/Ujeedooyin kala du -Wax ka soo saarid. -Musharax dihin/Musharax iman kara -Tababar horaad/Tababar hortiis.
154.Priority 155.Problem Solver 156.proficiency 157.Public 158.Public Sector. 159.Public Service 160.Regulation 161.Self Governance. 162.Self Introduction. 163.Self study. 164.Self Assesment 165.Shirinking Resources.
-Mudnaan. Furdaamiye/Xaliye dhib -Xirfad Hanasho/Aqoon sare u leh. -Guud -Qaybta Guud -Adeeg guud. -Xeer Hoosaad. -Isxukumid. -Is-sheegid/Is-tilmaamid. -Isbarid -Isqiyaasid/Isqiimeyn. -Khayraadka sii yaranaya
166.Technical -Farsamo/Farsamayn 167Training needs. -Baahi tababar. Priority three Words 168.Absolute Poverty -Saboolnimo 169.Absolute -Gebi-ahaan/Buuxda. 170.ApplicationCommit -Nidar-gal/Daba-qaad ballan ments 171.Bureaucracies
-Biroqraadiyad/Xafiisyad Dawladda oo shaqadoodu gaabis tahay
172.Caution 173.Density 174.Environmental Degradation
-Taxadar/Digniin. -Cufnaan/Jirmiga shega. -Hoos u dhac degaan/Hoos u dhac xaaladda degaanka
-Dheeli-tir/Is-le’eg -Ha is wareerin/Dadka naadiya
178.Jurisdiction. 179.Legal Requirment. 180.Legislation. 181.Legitimate 182.Matchmaker 183.Misinterpretation 184.Off-spring
-Haya’addaha Garsoorka. -Baahida Sharciyeed. -Xeer Degin. -Sharci ahaan/Qaanuun ahaan -Isku aadiye wax isku habboon -Fasiraad xumo/Fasiraad qaldan -Farac.
-Samo-filasho/Samo Wanaagsan ka eeg
188.Phenomina -Ifafaalayaal. 189.Professional -Xirfadle/Xeel-dheeri 190.Recycle -Sameyn celin/Dib u nacfi galin 191.Rules. -Qawaaniin/Xeer 192.Status Quo -Xaalad taagan 193.Stimulation. -Xiiso galin/Fi-fircooni galin. 194.To Wear different -Xilqaad badnaan/Kaalimokala duwan Hats. qaa 195.Waterpolution.
Xildhibaanka G/degaanka oo ah Hay’ad Dhise Tilmaame-bare 11